As Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် ၂၀၁၁ မတိုင်မီကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောပြင်းထန်သောငြင်းခုံမှုများတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝင်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အမြင်များကိုဆန့်ကျင်။ ပြissueနာမရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်အသားသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်များနှင့်မတူသောအင်တာနက်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်များကိုဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကသုတေသနနှင့်အတူပြဿနာကိုပတျဝနျးကငျြအချက်အလက်များ, လူတွေကသိပ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုတဲ့အခါပြဿနာများမကြာခဏပေါ်ပေါက်လာကြောင်းကိုထောက်ပံ့သောယုံကြည်အဖြစ်ကျနော်တို့ဆွေးနွေးငြင်းခုံပေါ်တွင်ရှင်သန်။ သို့သော်ဤနေ့, များစွာသောမဟုတ်လိုလားသူ porn တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကဲ့သို့သောမြိန်နည်းဗျူဟာမှအစားအသွင်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြ, ငါတို့နှင့်အတူထိရောက်သောဆွေးနွေးငြင်းခုံများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆန္ဒရှိကြပြီ ကောက်ရိုး-ယောက်ျား, မုသာစကား, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု, cyberstalking, နှောင့်ယှက်ခြင်း, အသရေဖျက်မှု - ယခုအခါ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု, အယောင်ဆောင်ခြင်း, ဒိုမိန်းအမည်ကီထိုင်.
ကျနော်တို့အချက်အလက်များနှင့်အညွှန်းစာနှင့်အတူချေပဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ကိုအဘို့မိမိတို့လိုလားတဲ့ porn အမြင်များမျှဝေဖို့ကဤဉာဏပြိုင်ဘက်အားပေးနေစဉ်, သူတို့တရားဝင်ခွင့်ပြုမထား အယောင်ဆောင် ကျွန်တော်တို့ကို။
ရှည်လျားသောမှာနောက်ဆုံး porn စွဲ deniers ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တစ်ခုအစီအစဉ်-မောင်းနှင်စုပေါင်း (RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက") အဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်
ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် - နီကိုးလ်ပရာ့စ်သည် YourBrainOnPorn ကိုရယူရန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာတင်ပြီး၊ YourBrainOnPorn.com Prause သည်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာကိုပေးပို့သည်။
2019 ပြီလ - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်း (realyourbrainonporn.com) နှင့်ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်း - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
အဘယ်ကြောင့် ScienceOfArousal.com ပြန်ပြောင်းမဟုတ်လော
RealYBOP တွစ်တာအကောင့် - ကြိုးစားခဲ့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်သိမ်းဆည်းမှုသည်ညစ်ညမ်းသောသံသယများကိုအသရေ ဖျက်၍ နှောင့်ယှက်သောညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းတွစ်တာအကောင့်တစ်ခုပါဝင်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများက Gary Wilson နှင့်တရားဝင်“ သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌တင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်” ကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချစဉ်“ RealYourBrainOnPorn.com” ကိုမြှင့်တင်ရန် Reddit အကောင့် (Sciencearousal) ကိုဖန်တီးသည်။
အဆိုပါ "ကျွမ်းကျင်သူများက" ညစ်ညမ်းရဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုတရားဝင်ပစ္စည်းကိုဖျက်နေစဉ် RealYourBrainOnporn.com မှလင့်များထည့်, ဝီကီပီးဒီးယားကိုတည်းဖြတ်ရန်နှစ်ခုနာမည်ဖန်တီး
ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များတွင်ပါ ၀ င်မှုအား Prause ကငြင်းဆိုသည်။ သို့သော်များစွာသောသက်သေအထောက်အထားများကသူမသည်ဤအကောင့်များကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုညွှန်ပြသည်
၂၀၁၁ မေလ ၁ ရက် - ချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုနောက်ကွယ်ရှိသူများ (“ ကျွမ်းကျင်သူများ”) ထံ YBOP မှစာများကိုရပ်ဆိုင်းရန်နှင့်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ နီကိုးလ် Prause သည် troll NerdyKinkyCommie ကို YBOP ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တရားစွဲဆိုမှုစာရွက်စာတမ်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ NerdyKinkyCommie သည်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ & RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများသည်သူတို့၏လိမ်လည်မှုများကိုဖြည့်စွက်။ သူ၏မသွေဖည်သောတွစ်တာများကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်
သြဂုတ်လ၊ 21-27, 2019 - ဂယ်ရီ Wilson အား Realyourbrainonporn (Daniel Burgess) အသရေဖျက်မှု / နှောင့်ယှက်မှု - Internet Wayback Archive တွင်ညစ်ညမ်းသော URL URL အတုများ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၊ စက်တင်ဘာ - NoFap ပါ ၀ င်သည့် CNN အထူးအစီအစဉ်ကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် RealYBOP Twitter (Prause မှစီမံသော) သည် Nofap မှ Alex Rhodes (tweets ၃၀ ကျော်) အားရှုတ်ချနှောက်ယှက်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Alex Rhodes သည်ဖယ်ဒရယ်တရားရုံးတွင် Prause အားပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားချက်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး RealYBOP ၏ twitter account (@BrainOnPorn) ကိုအသရေဖျက်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။
စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၀၊ YourBrainOnPorn ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် Daniel A. Burgess ထံသို့စာမရပ်ပါနှင့်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ - ဂယ်ရီ Wilson သည်သူ၏အမှတ်တံဆိပ်များအပေါ်ချိုးဖောက်မှုစွပ်စွဲချက်များကိုဖြေရှင်းခြင်းအဖြစ် RealYourBrainOnPorn.com (RealYBOP) ဒိုမိန်းအမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။
သင်မတွေ့ရှိနိုင်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအားဆန်းစစ်ခြင်းကိုသင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်“မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး၏ဝေဖန်မှုများဒီစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ချယ်ရီ-ကောက်ယူဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်လေ့လာမှုများ, ဘက်လိုက်မှု, ကွာဟပျက်ကွက်နှင့်ပရိယာယ်အပါအဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု '' 'သုတေသနစာမျက်နှာ "ကို examine ။
နွေရာသီ, 2019: မေလ 8, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်, MD တစ်ဦးအသရေဖျက်မှုတင်သွင်း se နှုန်း ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ဆန့်ကျင်။ ဇူလိုင်လ 24, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်ကသူ့အသရေဖျက်မှုတိုင်ကြားချက်ပြင်ဆင် (၁) တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးသူဘုတ်အဖွဲ့မှတိုင်ကြားချက်၊ (၂) ဒေါက်တာဟီလ်တန်သည်သူ၏အထောက်အထားများကိုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်းနှင့် (၃) အလားတူအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့်အခြား ၉ ခုမှဝေဖန်မှုများ။ယောဟနျသ Adler, MD, ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Stacy အညွှန့်, LICSW, Linda Hatch, Ph.D, Bradley အစိမ်းရောင်, Ph.D, Stefanie Carnes, Ph.D, Geoff Goodman, Ph.D, Laila Haddad.)
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက် ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်တွင် Alexander Rhodes ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် reddit / nofap နှင့် NoFap.com) သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည် နီကိုးလ် R ကိုချီးမွမ်း နှင့် Liberos LLC။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ဒီမှာတရားရုံးစာရင်း။ Rhodes မှတင်သွင်းသောမူလတန်းတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ NoFap တည်ထောင်သူ Alexander Rhodes Nicole Prause / Liberos အားတရားစွဲဆိုမှု.
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ၊ နောက်ဆုံးတွင်အမှတ်စဉ်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲသူ၊ အသရေဖျက်မှု၊ “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်” ၏ Megan Fox ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် PJ မီဒီယာ နှင့် “ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်လာသည်”၏ဒိုင်ယာနာ Davison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် The Post Millennial။ Davison သည် Prause ၏မတူကွဲပြားသောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤ6မိနစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Porn သည်စွဲစွဲလမ်းမှုလော။.
ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ တွင်အဲလက်စ်ရော့စ်သည်တင်သွင်းခဲ့သည် Prause ဆန့်ကျင်ပြင်ဆင်ချက်တိုင်ကြားချက် RealYBOP ရဲ့ twitter အကောင့်ကိုလည်းအမည်ပေးထားတယ်။@BrainOnPorn) အသရေဖျက်မှုအတွက်ပါဝငျအဖြစ်။ RealYBOP ၏လိမ်လည်မှု၊ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု၊ The @BrainOnPorn Twitter ကိုအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ PDF ၏တရား ၀ င်စာရွက်စာတမ်းများ @BrainOnPorn
သြဂုတ်လ 2020: ဂယ်ရီ Wilson သည်အမှတ်စဉ်အနှောက်အယှက်ပေးခြင်း၊ အသရေဖျက်မှု၊။ အသေးစိတ်များ - Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်.
၂၀၂၁၊ ဇန်နဝါရီလ - Prause သည်အသရေဖျက်မှုအတွက် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာတွင်ကျွန်ုပ်အားပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့်ဒုတိယတရားစွဲဆိုမှုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ 2021 ဇန်နဝါရီလ 2020 ရက်နေ့တွင်ကြားနာမှာ အော်ရီဂွန်တရားရုံးကကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုစီရင်ပြီး Prause အားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ထပ်မံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ပျက်ကွက်အားထုတ်မှုတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် တစ်ဒါဇင်တရားစွဲမှု လူသိရှင်ကြားခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။
ရှည်လျားသောနောက်ဆုံးမှာညစ်ညမ်းစွဲ deniers ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း (အနေနဲ့အစီအစဉ်-မောင်းနှင်စုပေါင်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက")
ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်အမြင်များကြိုဆိုပါတယ်နေချိန်မှာကျနော်တို့ကတန်ဖိုးရှိ၏ဤအသစ်ကစုပေါင်းများစွာကိုအဖွဲ့ဝင်များကထွက်ညွှန်ပြထင်ပါတယ် RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက" ကောင်းစွာ YBOP နှင့်အခြားညစ်ညမ်းသံသယဝါဒီ (နီကိုးလ် Prause, မာတီ Klein, Lynn Comella, ဒါဝိဒ်သည်ဂျေ Ley, အမ်မလီအက်ဖ် Rothman, ရှမွေလသည်ပယ်ရီ, တေလာ Kohut ဝီလျံ Fisher က, ပတေရုဖင်လန်, Janniko Georgiadis, အဲရ Janssen, Aleksandar Štulhoferမှလူသိများကြသည် ယောရှုသည် Grubbs ဂျိမ်းစ် Cantor မိုက်ကယ် Seto, Justin Lehmiller, ဗစ်တိုးရီးယား Hartmann ဂျူလီယာ Velten, ရော်ဂျာ Libby, Doug Braun-Harvey, ဒါဝိဒ်သည် Hersh, ဂျနီဖာ Valli, ချားလ်စ်တခု) ။ သူတို့ထဲကတချို့က၏စာရေးဆရာများဖြစ်ကြသည် ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်လေ့လာမှုများ အများအပြားကြက်တူရွေး မထောက်ပံ့လိုလားသူစက်မှုလုပ်ငန်းစကားပြောအချက်များသို့၎င်းတို့၏လမ်းကိုရှာဖွေရာ ဘက်လိုက် (ထားရှိ?) ခေတ်ရေစီးကြောင်းစာနယ်ဇင်းဆောင်းပါးများ.
ပညာရှင်တွေရဲ့၏အနည်းငယ် မှန်မှန်သတင်းသမားတွေလှည့်ဖြား၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်အယ်ဒီတာများ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုတေသနစစ်မှန်တဲ့ချိန်ခွင်လျှာအကြောင်းကို။ အပေါ် လူမှုမီဒီယာ နှင့် ဆောင်းပါးတွေကို တင်. သူတို့သူတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့အစုအဝေးမြှင့်တင်ရန် ချယ်ရီ-ခူး, ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ် စစ်မှန်တဲ့သက်ရောက်မှုတွေရှေ့နောက်မ သူတို့ရဲ့အချက်အလက်များ၏။ အလည်အပတ် ဒီစာမျက်နှာ သူတို့ရဲ့အများဆုံးမေးခွန်းထုတ်စရာသားမွေးတချို့၏ဝေဖန်မှုကိုတွေ့မြင်ရန်။
ထို“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည်များစွာသောဆိုရှယ်မီဒီယာသို့မဟုတ်ပူးတွဲရေးသားသည့်ပညာရေးသို့မဟုတ်လူကြိုက်များသည့်ဆောင်းပါးများတွင်ပုံမှန်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသော်လည်း RealYBOP ၏အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး စီသည်ယခုအချိန်အထိ လွတ်လပ်၍ ဘက်မလိုက်သောအမှန်တရားနှင့်သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအထောက်အကူဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ YBOP နှင့်အခြားညစ်ညမ်းသံသယရှိသူများစွာသည်ဤကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ ၀ င်အမျိုးမျိုးသည်သိသိသာသာနောက်ကွယ်မှကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်း၊ သတင်းစာဆရာများကိုကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်း၊ (ဤစာမျက်နှာ ၂ ခုသည်ဖော်ပြပါအပြုအမူများ၏ကျယ်ပြန့်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3နှင့် စာမျက်နှာ 4.
အဆိုပါနှစ်ဦးကိုအများဆုံးအသံများနှင့်အကောင်းဆုံးမသိ, နီကိုးလ် Prause နှင့်ဒါဝိဒ် Ley, ဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်းအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေမည်အကြောင်း, ရည်မှန်းချက်သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီး, ယုံကြည်သူအုပ်စုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုပစ်မှတ်ထား, ပေးခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်အသရေဖျက်မှုအတွက်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် cyberstalking စေ့စပ်ပါပြီ ။ သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်၏အနည်းငယ်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ် malfeasance ၏ Prause နှင့် Ley ရဲ့ရှည်လျားသမိုင်းသတိထားဖြစ်ကြသည်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျော်ဖြစ်ရပ်များရာပေါင်းများစွာမှတ်တမ်းတင်:
ဒါဟာ Prause အဖြစ် RealYBOP က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆက်စပ်သည့်လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်အတွက်သော့ချက်ပါဝင်သူ, ကြောင်းကိုဖွယ်ရှိပုံရသည်:
အဆိုပါအကြောင်းအရာ, လေ့လာမှုများ, နှင့်တရားမဝင် site ၏ထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်တွိ Prause ရဲ့ယခင် mirror ဝါဒဖြန့်အပိုင်းပိုင်း နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ရေးသားချက်များ။ သေအချာ, PornHub သစ်ကိုတွစ်တာအကောင့်မရှိသေးပါနောက်လိုက်ခဲ့သော်လည်းအသစ်ကတွစ်တာအကောင့်ရဲ့သမီးကညာကို tweet Retweet မှပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘယ်လို PornHub စတင်ဖွဲ့စည်းသိခဲ့တာလဲ
အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်, site ကိုနှင့်ဆက်စပ်လူမှုမီဒီယာ (လင်းလင်းရည်ညွှန်းသို့မဟုတ်လျှို့လျှို့ဝှက်) ပစ်မှတ်ဂယ်ရီ Wilson ကအကောင့်များနှင့် Prause ခဲ့ obsessive7နှစျကျြော Wilson ကနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် defaming.
ဤအစီအစဉ်-မောင်းနှင်က်ဘ်ဆိုက်ဖန်တီး Prause ရဲ့ဒုတိယကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ 2016 ခုနှစ်တွင်က porn စက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန်အဖြစ်ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်လေ့လာမှုများ "အပြုသဘောဆောင်သော" သက်ရောက်မှုသတင်းပို့ Prause (ကဖိုရမ်နှင့်အတူအသုံးပြုသောအဘယ်သူမျှမ) ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာအကောင့်ခဲ့သော "PornHelps," (@pornhelps) နှင့် website တစ်ခုလို့ခေါ်တဲ့အသုံးပြုသူအမည်ဖန်တီးပုံ porn ၏။ "PornHelps" နာတာရှည် Prause လည်းမကြာခဏတိုက်ခိုက်သောတူညီလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ badgered ။ တကယ်တော့, Prause သူ့ကိုယ်သူတခါတရံတခြားနေရာတွဲဖက်အတွင်း Twitter နဲ့အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကိုတိုကျခိုကျဖို့သူမ၏သိသာ alias ကို "PornHelps" နဲ့ထရှိနေသေးသည်လိမ့်မယ်။ စာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့ နီကိုးလ် Prause "PornHelps" ခဲ့သလား (PornHelps က်ဘ်ဆိုက်, Twitter ပေါ်တွင် @pornhelps, ဆောင်းပါးများအောက်မှာမှတ်ချက်) ။ Prause အဖြစ် outed ခဲ့သည်တစ်ချိန်ကအားလုံးအကောင့်ကိုဖျက်လိုက်ပါ "PornHelps ။ "
ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် - နီကိုးလ်ပရာ့စ်သည် YOURBRAINONPORN နှင့် YOURBRAINONPORN.COM ရရှိရန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့သည်။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာတစ်စောင်ပေးပို့လိုက်သည်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက် (YourBrainOnPorn.com) ၏ URL ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီးတစ်နေ့လျှင် unique ည့်သည် ၁၀,၂၀,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီးအကြောင်းအရာစာမျက်နှာ ၁၂၀၀၀ ကျော်နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလူသိများသောရှင်းလင်းရေးဌာနအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကတည်းကတာ ၀ န်ယူခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးကြာအောင်၎င်းသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခဲ့ပြီး၊ သတင်းဆောင်းပါးများ (သို့) podcasts များ၌ဖော်ပြခဲ့သည်သာမကသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်မှုလေ့လာမှုများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို site ၏အိမ်ရှင်သည်အလွန်လေးစားတန်ဖိုးထားသည့်စာအုပ်ကိုရေးသားသူလည်းဖြစ်သည် တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက် pornပထမဦးဆုံး 2014 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 29, 2019 တွင်, Prause တစ်ဦးတင်သွင်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာ YOURBRAINONPORN နှင့် YOURBRAINONPORN.COM ရရှိရန်။ ဤရွေ့ကားအမှတ်အသားများနာမည်ကျော်က်ဘ်ဆိုဒ်ကအသုံးပြုခဲ့ကြ www.YourBrainOnPorn.com နီးပါးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအဘို့နှင့်၎င်း၏အိမ်ရှင်ဂယ်ရီ Wilson က - မကြာခဏ 2013 ကတည်းကအဆုံးစွန်သောဘ်ဆိုဒ်နှင့်၎င်း၏အိမ်ရှင်ဖိုးမထားဘဲခဲ့သူကောင်းစွာ Prause သိအချက်အလက်များ။
1 မေလ 2019 ရက်နေ့တွင်ရှေ့နေများ ဘို့ "သင်၏ ဦး နှောက်မွေးဖွားသည်" နှင့် "ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ဘုံဥပဒေပိုင်ရှင်YourBrainOnPorn.com"(ဒီ website) ကိုစလှေတျတျော စာကိုရပ်။ ရပ်တန့်ပါ ချိုးဖောက်သောဆိုက်နောက်ကွယ်မှဖြစ်ဟန်ရှိသူအားလုံး (ဟုခေါ်) "ကျွမ်းကျင်သူများက"): မာတီ Klein, Lynn Comella, ဒါဝိဒ်သည်ဂျေ Ley, အမ်မလီအက်ဖ် Rothman, ရှမွေလသည်ပယ်ရီ, တေလာ Kohut ဝီလျံ Fisher က, ပတေရုဖင်လန်, Janniko Georgiadis, အဲရ Janssen, Aleksandar Štulhofer, ယောရှု Grubbs ဂျိမ်းစ် Cantor မိုက်ကယ် Seto, Justin Lehmiller ဗစ်တိုးရီးယား Hartmann ဂျူလီယာ Velten, ရော်ဂျာ Libby, Doug Braun-Harvey, ဒါဝိဒ်သည် Hersh, ဂျနီဖာ Valli ။
တစ်ဦးကစက္ကန့်စာတစ်စောင်ကိုလည်းကြောင်းတောင်းဆိုနေပြီ ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prause သူမ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်-squatting စွန့်ခွာ လြှောကျလှာ "Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်" ဟုအဆိုပါအမှတ်အဘို့နှင့် "YourBrainOnPorn.com ။ " စာမျက်နှာ ၈ မျက်နှာပါသော PDF ကိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်သို့မေလ ၁ ရက်၊
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပထမစာစောင်၏စာမျက်နှာ ၃ မျက်နှာမှဖန်သားပြင်များကိုကြည့်ပါ။
ဆက်သွယ်ရေးများအရ Prause ၏ဥပဒေရေးရာအကြံပေးသည်ကာကွယ်ပေးသည့်အဓိကရှေ့နေတစ် ဦး ဖြစ်သည့် Wayne B. Giampietro ဖြစ်သည် backpage.com။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရကလူကုန်ကူးခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုတမင်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့် backpage ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည် (USA Today ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ ) Backpage တည်ထောင်သူများထံမှလိင်လူကုန်ကူးမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ 93-count စွဲချက်တင်) ။ စွဲချက်တင်မှုကဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပြည့်တန်ဆာပြစ်မှုများကိုသိသိသာသာလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက် backpage ပိုင်ရှင်များနှင့်အခြားသူများအားတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များကလူကုန်ကူးခံရသူအချို့သည်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများပါ ၀ င်သည်ဟုပြောဆိုကြသည်။ Giampietro ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ။ https://dockets.justia.com/docket/illinois/ilndce/1:2017cv05081/341956. ဖြစ်ရပ်များ၏ထူးဆန်းအလှည့်၌, backpage.com ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအရီဇိုးနားမှသိမ်းယူခဲ့သည်။ နှင့် ဝိန်းခ Giampietro LLC $ 100,000 လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးအဖြစ်စာရင်းဝင်.
၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်တွင် YBOP & Gary Wilson ကိုကိုယ်စားပြုသည့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည် Prause ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆုပ်ကိုင်မှုကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရုံးနှင့်အတူ
UPDATE: သူမ (ရှေ့ဆက်သွားတော့မည့်) ဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုမှုရှုံးနိမ့်မည်ကိုသိသောကြောင့်နီကိုးလ်ပရာ့စ်သည် YOURBRAINONPORN နှင့် YOURBRAINONPORN.COM ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတရားမ ၀ င်ကြိုးပမ်းမှုကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ အောက်တိုဘာလ 18, 2019 သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရုံးသည် Prause (လျှောက်ထားသူ) အပေါ်စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။
တရားဝင် YBOP, ဤ website, ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုအားဖြင့်ရပ်နှင့်နီကိုးလ် R. Prause နှင့်ချိုးဖောက်မှုများနှင့်မတရားသောလှုပ်ရှားမှုများဖြေရှင်းရန်ဥပဒေရေးရာခြေလှမ်းများအောင်မြင်ခဲ့ ဒံယလေသ Burgess။ Next ကို "RealYourBrainOnPorn ။ "
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု (realyourbrainonporn.com) နှင့်ပစ်မှတ်ထားနှောင့်ယှက်
ဧပြီလ 2019 ခုနှစ်တွင်တစ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပစ်မှတ်ထားစတင်ခဲ့သည် YourBrainOnPorn.com ။ URL ကိုနှင့်အတူသစ်က်ဘ်ဆိုက် realyourbrainonporn.com ScienceOfArousal.com ၀ က်ဘ်ဆိုက် (အပေါ်တွင်ကြည့်ပါ) ပေါ်ပေါက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းနောက်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသော URL သည်ကိုယ်ပိုင်ကြေငြာချက်များစွာကိုဖော်ပြသည်။ကျွမ်းကျင်သူများက" အစားထိုး အစောပိုင်း ScienceOfArousal.com ။ အဆုံးစွန်သောအဘို့ URL ကိုအသုံးပြုခြင်း site ရဲ့ URL (ချိုးဖောက်) ကဒုတိယရန်၎င်း၏ဧည့်သည်များ redirected ။
imposter site အသစ်သည် each ည့်သည်ကိုလှည့်စားရန်ကြိုးစားသည်။ စာမျက်နှာတစ်ခုစီ၏ဗဟိုက“, Porn တွင်အစစ်အမှန်သင့်ဦးနှောက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်“ သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြေငြာသည်။
imposter site ၏ link ကိုအီးမေးလ်ပို့သောအခါ“ သင်၏ Brain on Porn on” ဟုပေါ်လာလိမ့်မည်။
အခါ RealYourBrainOnPorn (@BrainOnPorn) tweet က "Porn ပေါ်မှသင့်ဦးနှောက်" အဖြစ်ပုံပေါ် retweeted ဖြစ်ပါတယ်နှင့် "YBOP (ကျွန်ုပ်တို့၏အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်အမည်ပြောင်)":
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုလှည့်ဖြားရန်ကြိုးစားရာတွင် RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူ၏စာမျက်နှာရှိဓါတ်ပုံများသည်“ YBOP”,“ သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တင်” နှင့်“ Ted Talk Porn” (ကုဒ်ရည်ညွှန်း) စသည်တို့ကုဒ်ပါ ၀ င်သည်။ Gary Wilson ၏လူသိများသော TEDx ဟောပြောချက်) ။ သွားပါ RealYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” စာမျက်နှာ, ပုံကိုအပေါ်သို့ပျံဝဲ (ညာဘက်ကလစ်) နှင့် image ကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ထိုပုံ၏ code / name ကိုကြည့်ရှုရန်ကြည့်ရှုပါ (ဥပမာ - Joshua Grubbs ဓာတ်ပုံ -
အဆိုပါ 25 သို့မဟုတ်ဒီတော့ဓါတ်ပုံကနေအနည်းငယ်ဥပမာ:
https://images.squarespace-cdn.com/content/5c8839d8e666693a7d4a166c/1555910531801-X65CMW5M71ABE9ILZHR4/+ Porn တွင်သင့် + ဦးနှောက် +? format = 500w & content-type = image% 2Fjpeg
https://images.squarespace-cdn.com/content/5c8839d8e666693a7d4a166c/1554935878304-OQ4QZ31DV46187QD7411/Ted + Talk ကို + Porn? format = 300w & content-type = image% 2Fjpeg
အဆိုပါအတု site ကိုများအတွက် URL ကို မတ်လ 13th, 2019 အပေါ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်:
ပွဲ၌ဂယ်ရီ Wilson ကနှင့်တရားဝင် YourBrainOnPorn အဆိုးကိုအဆိုးနေချိန်မှာသူတို့ရဲ့အသစ်သော site ကိုမြှင့်တင်ရန်, ထို imposter site ၏ဖန်တီးသူ (ကတွစ်တာအကောင့် createdhttps://twitter.com/BrainOnPorn), ယူကျု့ချန်နယ်, Facebook ကစာမျက်နှာနှင့်ထုတ်ဝေနေတဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်.
တွစ်တာအကောင့်: ပိုစတာတင်သူနှင့် ၄ င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟုတ်မဟုတ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါ။ကျွမ်းကျင်သူများကညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်သိပ္ပံဆိုင်ရာအမှန်တရားကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုအကျိုးရှိသည် RealYBOP tweets ၏ဤစုဆောင်းမှု (ဥပဒေရေးရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကောက်ယူ) ။ ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prause ရဲ့ထူးခြားတဲ့, အထင်အမြင်မှားစေစတိုင်, ချက်တွေကို porn ၏အကျိုးကျေးဇူးများခြီးမွှော, ထိုသုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်နှင့် Prause ယခင်ကနှောင့်ယှက်ထားပါတယ် trolls တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှေ့နောက်မ။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်လူထုကိုရှုပ်ထွေးစေရန်နောက်ထပ်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုတွင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်သည်ဂယ်ရီ Wilson ၏ဇာတိမြို့ဖြစ်သော Ashland, Oregon မှဖြစ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ (အဘယ်သူမျှမ အဆိုပါ imposter site ၏ "၏ကျွမ်းကျင်သူများကအော်ရီဂွန်တွင်နေထိုင်ပါ၊
ထို့အပြင် imposter site ၏ဖန်တီးသူ (က reddit အကောင့်မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူ / sciencearousal) spam များကိုညစ်ညမ်းပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များမှ reddit / pornfree နှင့် reddit / NoFap ပရိုမိုးရှင်း drivel အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟုဆိုကာအန္တရာယ်ကင်းနှင့် YourBrainOnPorn.com နှင့်ဂယ်ရီ Wilson က (အောက်တွင်သူတို့၏ reddit မှတ်ချက်တွေကိုကြည့်ပါ) အဆိုးကိုအဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ Prause ရဲ့စတိုင်တွင်ဤမှတ်ချက်များ, သူမ၏လေ့လာမှုများမြှင့်တင်ရန်, တိုက်ခိုက် porn စွဲ၏အယူအဆ, Wilson ကနှင့် YBOP ကဲ့ရဲ့ရှု, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ယောက်ျားနှိမ်နှင့် porn သံသယဝါဒီရဖျက်။ Prause တစ်ဦးရှိပါတယ်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာင် ရှည်လျားပြီးမှတ်တမ်းတင်သမိုင်း porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များတွင်တင်ရန် aliases များမြောက်မြားစွာကိုအသုံးပြုခြင်း (သူမနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သော Nicole Prause ၏ PDF ဖိုင်သည်).
ဧပြီလ 25th, ထိုတွင် Sciencearousal အသုံးပြုသူအမည် လင့်များထည့်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုတရားဝင်ပစ္စည်း, ဖျက်ခြင်းဝီကီပီးဒီးယားအပေါ်ထင်ရှား၏။ (ဧပြီလ 17 တွင် Sciencearousal ရဲ့နာမည်များထဲမှတူညီလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့: SecondaryEd2020) ။ အောက်ပါ scienceofarousal Wikipedia တည်းဖြတ်မှုများကိုကြည့်ပါ။ ဤစာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာသည်တရား ၀ င်တရားမဝင်သော Prause ၏ရုပ်သေးရုပ် (၃၀) ကျော်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့်သတင်းမှားများ၏ဤလှုံ့ဆော်မှုသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ကျွမ်းကျင်သူများက")၊ သူမဝါဒဖြန့်ချိရေးကိုထည့်သွင်းရန်နှင့်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုရှုတ်ချရန်သူဖန်တီးခဲ့သော စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2။ (ဝီကီပီးဒီးယား၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ sock-puppets) ကိုပိတ်ပင်ထားသည် Sciencearousal တစ် ဦး အဖြစ် “ NeuroSex” ၏ 8 sockpuppets ။ မှ Sciencearousal ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာ:
နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးမှာတော့ဒီမှာအမှားမရှိဘူးဆိုတာရှင်းပါတယ်။ သင်အမှန်ပင်ဖြစ်သည် NeuroSexသင့်ရဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုရှောင်ရှားရန်ဆက်လက်။ -Yamla (စကားပွော) 22: 45၊5မေ 2019 (UTC)
NeuroSex ကတော့နီကိုးလ် Prause ပါ
တရားဝင် YBOP, ဤ website၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အရင်းအမြစ်များအားဖြင့်ရပ်နှင့်ချိုးဖောက်မှုနှင့် "ရီးရဲလ်သင့်ဦးနှောက် Porn တွင်" site ၏မတရားလုပ်ဆောင်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ဥပဒေရေးရာခြေလှမ်းများယူပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဤသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘယ်ကြောင့်ကြေညာခဲ့သနည်း။ကျွမ်းကျင်သူများကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏နာမည်ကိုထင်ဟပ်စေရန်သူတို့၏ဆိုက်အမည်ကိုပြောင်းလဲပါ ပထမဦးဆုံးအ-ရွေးချယ်မှု URL ကို ScienceOfArousal.com ခဲ့သည်? သက်သေပြ: ဤ URL ကိုသင့် browser ထဲသို့ကူးယူပါ။ ၎င်းသည်သင့်အား“ realyourbrainonporn” သို့ https://web.archive.org/web/20190414191620/https://scienceofarousal.com/ သို့ရောက်သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်သော ScienceOfArousal.com သို့ပြန်လည် ၀ င် ရောက်၍ လွတ်လပ်စွာဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့်အချိန်တွင်သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုအားရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြင့်ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းခံရပြီဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုရသနည်း။ နှင့် တရားဝင်?
SOA ပထမဦးဆုံးထင်ရှားပေါ်ထွန်းလာသောအခါဧပြီ 16, 2019, FROM မှ SCREENSHOT
ဆန့်ကျင်ဖက်အမြင်များနှင့်ဝေဖန်မှုများကိုဆင်ဆာလုပ်ရန်ဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့ပါ၊ကျွမ်းကျင်သူများကဖယ်ရှားပစ်ရန်ထပ်တလဲလဲကြိုးစားခဲ့သူဒေါက်တာ Prause သူမ၏အပြုအမူ၏သက်သေအထောက်အထားများ အခြေအမြစ်နှင့်အတူ DMCA ဖယ်ရှားရန်တောင်းဆိုမှုများကို။ ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာ, ဤအသံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၎င်းတို့၏မူလတရားဟောစဉ်မြင့်ရှိရာကိုထဲကထွက်ကိုင်ထားကြောင်းကို URL ကိုများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အမည် "arousal ၏သိပ္ပံ" (ScienceOfArousal.com) မေးမြန်းပါ။ ထိုသူတို့လက်လွှတ်ကြောင်း နောက်ဆက်တွဲ သူတို့ကသက်ဆိုင်ရာနှင့်အတူအလုပ်အမည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာ (YBOP နီးပါး 10 နှစ်ပေါင်းအောက်မှာ operated သောနာမအဘို့) ။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကငါတို့၏ website မှ traffic ကိုဖိနှိပ်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူရှုပ်ထွေးဤသိသာကြိုးစားမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသလဲ?
Update ကို (ဇူလိုင်လ, 2019): ဥပဒေရေးရာလုပ်ရပ်များကြောင်းထင်ရှား ဒံယလေသ Burgess မူလကမှတ်ပုံတင် realyourbrainonporn.com URL ကို. ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမတိုင်မီကကျွန်ုပ်သည် Daniel Burgess LMFT အကြောင်းကိုတစ်ခါမှမကြားဖူးပါ။ ရုတ်တရက်, ဘယ်နေရာမှာထဲက Burgess ငါနဲ့ YBOP ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးကိုသုံးတယ်။ Burgess ၏ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည် တွစ်တာပေါ်မှာ (တော်တော်များများအောက်မှာ @YourBrainOnPorn tweets) နှင့် Facebook တွင် (ထို YBOP Facebook က စာမျက်နှာ၏တဦးတည်း Burgess ရဲ့ Facebook ကိုစာမကျြနှာ, ပြီးနောက် အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသ Facebook စာမျက်နှာ).
မိမိအဖေဖော်ဝါရီလ / မတ်လ, 2018 လူမှုမီဒီယာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်း ဒံယလေသ Burgess ရှုတ်ချခြင်းနှင့်ငါ့ကိုနှောင့်ယှက် - နီကိုးလ် Prause ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်း regurgitating မုသာကို set ကို နှင့် သားကောင် - ပါးပျဉ်း၏လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများသူမကနှစ်ပေါင်းများစွာပြသခဲ့သည်။ Burgess ၏မှတ်ချက်များနှင့်တွစ်တာများသည် Prause နှင့်ဆင်တူသည် တီထွင်ပြစ်၏နွှယ်နေတယ်လို့, Burgess နှင့် Prause ပူးပေါင်းနှင့်အနီးကပ်ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ကြောင်းသံသယထွက်ခွာ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ဒံယလေသ Burgess (မတ်လ, 2018) ကပံ့ပိုးမတောင်းဆိုချက်များနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုက်ခိုက်မှုများ addressing.
"RealYBOP တွစ်တာအကောင့်": ကြိုးပမ်းခဲ့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆုပ်ကိုင်တစ်လိုလားသူ porn စက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့်အတူတစ်ဦးတွစ်တာအကောင့်လည်းပါဝင်သည်
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ပြည့်သော အသစ်က site ကိုအားဖြင့် tweets ၏စုဆောင်းမှု (၎င်းတို့အားလုံးသည် Prause & Ley ၏ထူးခြား။ အထင်မှားစေသောပုံစံဖြင့်ရေးထားသည်)။ ဤရွေ့ကားဥပဒေရေးရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပြုစုခဲ့ကြသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အတရားသူကြီး, သူတို့ porn စက်မှုလုပ်ငန်း၏အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသစ္စာသည်စစ်မှန်ရှာဖွေရေးနောက်ထပ်သလဲ? ကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းအောက်တွင် ကို select RealYBOP သည်တွစ်တာ၊ Prause ၏အကျွမ်းတဝင်အစီအစဉ်ကိုဖော်ပြသည်။
မှတ်စု: အ RealYBOP များအတွက် twitter အကောင့် ညစ်ညမ်းလေ့လာမှုများ၏ကျယ်ပြန့်သဘောအရဆိုလျှင်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များသတင်းပို့သော်လည်း ... porn နှင့်ဆက်စပ်သောအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအစီရင်ခံလေ့လာမှုတစ်ခု tweet မရှိသေးပါ။ ဒါကတစ်ယောက်တည်း porn စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အစီအစဉ်မြှင့်တင်ရန်အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအကောင့်ဖျောထုတျ။
ကျနော်တို့ရီးရဲလ် YBOP အားဖြင့်အလွန်ပထမဦးဆုံး tweet နှင့်အတူစတင်ပါ။ အဆိုပါ Retweet ၏အကြောင်းကိုတစ်ဝက် porn စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်အကောင့်အားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ မှတ်စု: RealYBOP အကောင့်ကြောင်းအချက်မှာအဘယ်သူမျှမနောက်လိုက်ခဲ့သည့်အတိုင်းဤအကောင့်ဖွယ်ရှိအီးမေးလ်ကနေတဆင့်အကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ တကယ်တော့, PornHub PornHub နှင့် RealYBOP အကောင့်များအကြားညှိနှိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုညွှန်း, ဒီ Retweet မှပထမဦးဆုံးအကောင့်ပဲ!
PornHub အထက်ပါ Retweet မှပထမဦးဆုံးအကောင့်ခဲ့သည်, ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းနှင့် RealYBOP အကြားရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုဖော်ထုတ်သည်
RealYBOP Twitter နဲ့က်ဘ်ဆိုက်ဟာညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ပေး. တရားမျှတမှုမရှိတော့ကြောင်းဆိုပါသည်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား။
Prause မကြာခဏမသကဲ့သို့, RealYBOP porn အသုံးပြုမှုပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေမလုပ်ပဲကြောင်းအကောင့်တစ်ခု trolls:
Prause & Ley ကဲ့သို့ပင် RealYBOP သည် porn နှင့်ပတ်သက်သောပြည်နယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတိုက်ခိုက်သည်။
Gary Wilson (Prause & Ley ၏အဓိကပစ်မှတ်များမှာ Wilson နှင့် YBOP) ဖြစ်သည်။ Prause မှလွဲ၍ အခြားသူကမည်သူပြုလုပ်မည်နည်း။
Prause & Ley မကြာခဏပြုလုပ်သကဲ့သို့, RealYBOP သည်တေလာ Kohut ၏အဆိုးရွားဆုံးဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုကိုကိုးကားသည်။
တေလာ Kohut ရဲ့ skewed အရည်အသွေးစက္ကူနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကဒီမှာဖျက်သိမ်းသည်: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏စုံလင်သောဆက်ဆံရေးအပေါ်ရိပ်မိအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ပါဝင်သူ - သတင်းပေးမှု၊ “ အောက်မှ -Up” သုတေသန (၂၀၁၆)၊ တေလာကိုဟွတ်၊ ဝီလျံအေ Fisher၊ Lorne Campbell ၏ကန ဦး တွေ့ရှိချက်များ။ ဒီတေလာ Kohut လေ့လာမှုနောက်ကွယ်မှရည်ရွယ်ချက်ကတန်ပြန် (ရန်ကြိုးပမ်းမှု) ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဆက်ဆံရေးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 65 လေ့လာမှုများကျော်။
RealYBOP trolls သံသယမဂ္ဂဇင်း (ဂယ်ရီ Wilson ကနဲ့ Phil Zimbardo အားဖြင့်2ဆောင်းပါးများထုတ်ဝေခဲ့သူ) အယ်ဒီတာမိုက်ကယ် Shermer ။
Prause နှင့် Ley မကြာခဏဒေါက်တာ Zimbardo ဖိုးမထားဘဲပြီ နွေရာသီ၊ ၂၀၁၈ နွေရာသီ - Prause & David Ley သည်ကျော်ကြားသောစိတ်ပညာရှင် Philip Zimbardo ကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်
တနည်းကား, ဝါဒဖြန့်ခြင်းနှင့်မုသာပျံ့နှံ့ဖို့ချည် trolling ။ RealYBOP သည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲ ICD-11 နှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်သည်။ Prause သည်ယခင် tweets ၅၀ နှင့်သူမကဲ့သို့ပင် slate ဆောင်းပါး: "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က.
RealYBOP သည်ဒုတိယအကြိမ်တွစ်တာတွင် Prause & Ley ၏အကြိုက်ဆုံးစကားပြောဆိုမှုအားလုံးကိုတုပသည်။
Next ကိုတက်: အထွေထွေသောလူဦးရေထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အနိမ့်နှုန်းထားများ: မျှော်လင့်ထားသည့်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံရသောအမျိုးသမီး porn ကြယ်အပေါ်တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်မြှင့်တင်ရေး။ ဒါပေမဲ့ RealYBOP အများကြီးကိုတွေ့သောတူညီသောသုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလေ့လာမှုတစ်ခု tweet ဘူး ပိုမိုမြင့်မား အထီးအဆိုတော်အတွက်ပညာရေး၏နှုန်းထားများ! အဆိုပါ အထီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေ၏သုတေသနစစ်တမ်း 2018 ထုတ်ဝေ (ပူးပေါင်းလိင်စဉ်အတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာသော IIEF, erectile function ကိုများအတွက်စံ urology စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်) အထီး porn ကြယ် 37%, အသက်အရွယ် 20-29, ပြင်းထန် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှအလယ်အလတ်ခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် Ley ရဲ့နံပါတ် 1 စွဲ။ ဤတွစ်တာတွင်ဂယ်ရီ Wilson နှင့်ရေတပ်ဆရာဝန် ၇ ဦး ပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုဖြစ်သည်။ အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု (ပန်းခြံ et al။ , 2016) ပြန်ရုပ်သိမ်း။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်စက္ကူ: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (ပန်းခြံ et al ။, 2016)။ အစောပိုင်း 2019 ၏အဖြစ်, ပန်းခြံ et al။ , 2016 ဖြစ်ခဲ့သည် 40 ကျော်ကတခြားသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများအားဖြင့်ကိုးကားနှင့်ဖြစ်ပါသည် အများဆုံးကြည့်ရှုအားပေးစက္ကူ အဆိုပါဂျာနယ်များ၏သမိုင်းမှာ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ။
အဆိုပါ RealYBOP tweet နှစ်ခုသည်မုသာ:
ရီးရဲလ် YBOP အဖြစ်ပွားအကြောင်းကိုတည်ရှိသည် ပန်းခြံ et al ။, 2016, စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်, အသစ်လေ့လာမှုရေတပ် urology ဆေးခန်းထံမှစစ်တမ်းဒေတာဖြစ်ခဲ့သည်။ (သင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကို "ပုံတူကူးယူ" လို့မရပါဘူး။ )
အသစ်ကစက္ကူအဆိုပါစာရေးဆရာက porn-သွေးဆောင် ED ၏တည်ရှိမှုကိုအထောက်အပံ့ယုံကြည်ပါတယ်။
အဆိုပါ လက်ရှိလေ့လာမှု၏စာရေးဆရာများအားဖြင့်လှည့်ဖျားခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်နှင့်အတူသဘောမတူဘူး "realYBOP ။ " အမေရိကန်ရေတပ်သည်ဆရာဝန်များက၎င်းတို့၏ဒေတာ (screenshots များကိုကြည့်ပါ) porn-သွေးဆောင် ED ၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးယုံကြည်ပါတယ်။ သူတို့ (YBOP နှစ်ပေါင်းပြောကြားခဲ့သည်ကားအဘယ်သို့သော) မဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းစွဲထက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်သံသယရှိကြသည်။ ဇယား:
အထက်ပါလေ့လာမှုကိုအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအသင်း၏ ၂၀၁၇ အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြခဲ့သည် - လေ့လာမှု porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (2017) တို့အကြား link ကိုမြင်သည်။
အောက်ပါ4tweet စီးရီးများတွင်, RealYBOP ဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့ချည်အပေါ်ရေးသားထားသည်။ Prause နှင့် RealYBOP နှစ် ဦး စလုံးသည် Wilson အားပိတ်ဆို့လိုက်သောကြောင့်သူတို့၏ချည်များပေါ်တွင်တွစ်တာများကိုခိုးယူသွားနိုင်သည်။ Wilson ကသူတို့ရဲ့သတင်းမှားကိုဖြုတ်ပစ်မှာကိုသူတို့ကြောက်သလား။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 28ပြီလ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် - Cry Cry ၏ညွှန်ကြားချက်မှ RealYBOP မှတွစ်တာအဟောင်းများကိုထိန်းချုပ်သည်။ Laila Mickelwait။ Prause နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ထှကျမွောကျရာ Cry, သူတို့ရဲ့ CEO ဖြစ်သူဗင်ျယာမိ Nolot နှင့်ဒါရိုက်တာ Laila Mickelwait libeled အတိုင်းဤသည်အဘယ်သူမျှမတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို Prause စာမျက်နှာ #2 ဤအပိုင်းကိုတွေ့မြင်: ဖေဖော်ဝါရီလ 2019: Prause မဟုတ်မမှန်လိမ်လည်မှုထှကျမွောကျရာ Cry စွပ်စွဲပါတယ်။ CEO ဖြစ်သူရဲ့ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်ရန်တွေ့မြင်, (spurious အကြောင်းပြချက်များအတွက်) သည်မစ်ဆူရီရှေ့နေချုပ်မှ non-အမြတ်အစီရင်ခံရန် twitter နောက်လိုက်ကမေးတယ်။
RealYBOP tweets အောက်မှာ 2-တပတ်အဟောင်း tweetအဆိုပါသုတေသနအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင် (အတိအကျ Prause တူသောအသံ)
RealYBOP အခြား trolls အဟောင်းကို Mickelwait ချည်,-Norman Doidge porn-သွေးဆောင် ED နှင့်ပတ်သက်ပြီးမှားကြောင်းသူမ၏အသိပေး:
ဒီမှာ "အမှန်တကယ်သိပ္ပံပညာရှင်များ" အချို့ရှိပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ရှိပါတယ် ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအများအပြားပိုပြီး RealYBOP tweets (အရာဥပဒေရေးရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်စုဆောင်းနေကြသည်) ။
အဆိုပါ "ကျွမ်းကျင်သူများက"Reddit အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ (Sciencearousalဂယ်ရီ Wilson နှင့်တရားဝင်“ သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌တင်ခြင်း” ကိုရှုတ်ချရာတွင် RealYourBrainOnPorn.com ကိုမြှင့်တင်ရန်
13 Aprilပြီလ 2019 ရက်နေ့တွင် RealYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည် reddit account တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည် အသုံးပြုသူ / sciencearousal trolls နှင့် spam များကိုမှများသောအားဖြင့် "Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်" နေရာတိုင်းမှာဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့အမည်သို့မဟုတ်ပို့စ်တင် reddit porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ, ထင်ရှား။ , မဟုတ်ရင်အသိပေးအချိန်အထိကျနော်တို့ယူဆရမယ် အသုံးပြုသူ / sciencearousal အားလုံးအဘို့အပြောတတ် (defames?)ကျွမ်းကျင်သူများက"သူတို့ရဲ့စုပေါင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသော: https://www.realyourbrainonporn.com/experts ။
Sciencearousal ရဲ့ ပထမဦးဆုံးအ post ကိုရဲရငျ့စှာ "Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်" ဟုအဆိုပါ imposter site ကိုမှကိုးကား:
ပိုများသော trolls / spam ဖြန်:
သူ့ကိုအဆိုးကိုအဆိုး, ဂယ်ရီ Wilson ကအကြောင်း2လဟောင်းများကို post ကို Trolling:
အထက်ပါမှတ်ချက်များသည်နီကိုးလ်ပရာ့စ် (နှင့်သူမ၏နာမည်အတိုကောက်များစွာ) နှင့်ဒေးဗစ်လိုင် (David Ley) တို့၏လုပ်ရပ်များကိုထင်ဟပ်စေသည်။သူမနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သော Nicole Prause ၏ PDF ဖိုင်သည်) ။ Wilson သည်aကိုထုတ်ဝေပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ Prause 's ပထမဦးဆုံး EEG လေ့လာမှု၏ဝေဖန်မှု။ အဆိုပါမှတ်ချက်အကြောင်းအရာနှင့်သေံအတွက်အလွန်ဆင်တူသည်။ စအဦး၌ Prause အပေါ် post မှအတု username များများစွာအလုပ် porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ, Quora, ဝီကီပီးဒီးယား, ထိုအတွက် မှတ်ချက်အပိုင်း ဆောင်းပါးတွေအောက်မှာ။ Prause မရှိသလောက်သူမ၏အမည်ရင်းသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လူမှုမီဒီယာအကောင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
UCLA (ဇန်နဝါရီ, 2015 န်းကျင်) Prause ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန်ကိုရွေးတော်မပြီးနောက်သမျှသောပြောင်းလဲသွားတယ်။ မဆိုကြီးကြပ်မှုနှင့်ယခု Self-အလုပ်ကနေလွတ်မြောက်, Prause ဆိုက်ဘာ-နှောင့်ယှက်မျိုးစုံတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများလူမှုရေးမီဒီယာပေါ်နှင့်အခြားနေရာများတွင်ထင်ရှားစွာ, အမှားဆိုတာသိစေချင်တယ်မှသူမ၏နာမကိုအမှီထားတော့တယ်။ Prause ၏အဓိကပစ်မှတ်ဝီလ်ဆင် (နောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများကိုအီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်အတူလူမှုရေးမီဒီယာမှတ်ချက်များရာပေါင်းများစွာ) ဖြစ်သကဲ့သို့, က Prause ရဲ့ tweets နှင့်ပို့စ်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤသည်သူမ၏သားကောင်များ '' ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဘို့ပြု, နှင့်မည်သည့်အနာဂတ်ဥပဒေရေးရာလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အလွန်အရေးပါခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား4စာမျက်နှာများကိုနှောင့်ယှက်သည့်ဖြစ်ရပ်ရာပေါင်းများစွာနှင့်မှတ်တမ်းတင်သရေဖျက်မှုမှတ်တမ်းတင်:
နောက်တကြိမ်, မှတ်ချက်များ Wilson ကအဆိုးကိုအဆိုး, Prause (နှင့်သူမ၏အများအပြားနာမည်) ကဖန်ဆင်းတော်သူတို့အား mirror ။ ဖြည့်စွက်ကာ, Sciencearousal အဆိုပါသုတေသန၏ပြည်နယ်ဂေါ်အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုအားပေးအားမြှောက်နှင့် ar / pornfree အဖွဲ့ဝင်အသိပေး ကြောင်း porn အသုံးပြုမှုကိုလူဦးရေရဲ့ 99% သည်အပြုသဘောဖြစ်ပါသည်:
Sciencearousal အခြားချည် "Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်" ဖော်ပြ trolls:
Sciencearousal "Brain On Your Brain" ဆိုတဲ့နောက်ထပ်ကြိုးတစ်ချောင်းကိုလှည့်စားနေတယ်။ NoFap ကို spam ပြုလုပ်သည့်လူတစ် ဦး subreddit တွင်မှတ်ချက်ပေးသည်။ အဆိုပါအိုးများသည် Gary Wilson ၏ TEDx ဟောပြောချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ReaYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူ” Jason Winters ၏ ၂၀၁၂ စကားများဖြစ်သည်။
ဂျေဆန် Winters rant နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သည်ဤ2ကျယ်ပြန့်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် debunked ခဲ့သည်:
Sciencearousal နှစ်ဦးစလုံးအဆိုးကိုအဆိုး, ဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့စာအုပ်ဖော်ပြနေတဲ့ချည် trolls: Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ
Prause နှင့်သူမ၏အင်တာနက်နာမည်အဖြစ်မရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်ပြုမိပါပြီ, Sciencearousal Wilson ကရဲ့ TEDx ဆွေးနွေးချက် disparages:
Prause (နှင့်“ RealYBOP” တွင်ဖော်ပြထားသောအခြား“ ကျွမ်းကျင်သူများ”) သည် TED ကိုငါးနှစ်ကြာအနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့သည်ဟူသောသက်သေအထောက်အထားများရှိသည်။ ၎င်း၏ဘက်လိုက်သည့်“ သိပ္ပံပညာရှင်မှူး” မပေးမချင်း (သင်ကြားရေးသည်သိပ္ပံပညာမဟုတ်ဘဲဘွဲ့သာဘွဲ့သာဖြစ်သည်) နှင့် ဟောပြောချက်အပေါ် unmerited မှတ်စုတင်လိုက်တယ်။ အမှန်တကယ်တွင် TEDx ဆွေးနွေးချက်မှအရာအားလုံးကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသည်။ ရာနှင့်ချီသောလေ့လာမှုအသစ်များသည်ဆွေးနွေးမှုကိုပေးပြီးကတည်းက၎င်းကိုထောက်ခံကြောင်းထောက်ခံခဲ့သည် (မတ်လ၊ ၂၀၁၂) ။ Wilson ၏ဟောပြောချက်အတွက်သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အပံ့အတွက်ဤစာမျက်နှာ ၂ ခုကိုကြည့်ပါ။
Sciencearousal RealYBOP တိကျစွာ (သုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်ကိုကိုယ်စားပြုသောလောကဓာတ်ဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားစဉ် Wilson ကကဲ့ရဲ့ရှုဆက်လက်ကမ):
ပိုများသောတိ, မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများအားဖြင့် Sciencearousal။ Wilson ကအပေါ်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှုများ:
အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များ (အကြောင်း, porn လေ့လာမှုအများစုဖြစ်ပါတယ်) အားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်နီးပါးတိုင်းလေ့လာမှုဖယ်ထုတ်ပြီးစဉ်စကားမစပ်, အ imposter site ကို, ချယ်ရီရွေးချယ်လေ့လာမှုများပါရှိပါတယ်။ ကြောင်းစာရင်းသူတို့အားအနည်းငယ် RealYBOP လေ့လာမှုများအတွက် ကိုပြု အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များသတင်းပို့, RealYBOP ယင်း၏ဖော်ပြချက်အနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောတွေ့ရှိချက် omits ။ သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှု YBOP ရဲ့ပြတိုက်မှူးစာရင်းကျေးဇူးတင်ပါသည်မည်သူမဆိုအလွယ်တကူ RealYBOP ရဲ့ဘက်လိုက်မှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်
RealYBOP အားလုံးချန်လှပ် porn အသုံးပြုသူများနှင့် CSB ဘာသာရပ်များအပေါ် 45 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ, မှလွဲ. Prause et al ။ , 2015 (RealYBOP သည့်အကြောင်းကိုစာဖတ်သူတွေကိုပြောပြမထားဘူး Prause ရဲ့ EEG လေ့လာမှုတကယ်စွဲမော်ဒယ်ကို support ဆို9peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများ).
RealYBOP ၏အားလုံးပေမယ့်နှစ်ဦးကိုချန်လှပ် ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 75 လေ့လာမှုများကျော်။ ဒါဟာ (ထို "မေတ္တာ" ကဏ္ဍနှင့်အခြားသူများ) အဲဒီ2လေ့လာမှုများအပေါ်စာဖတ်သူကိုလမ်းလွဲ: link ကိုညစ်ညမ်းဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုမှအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖောက်ပြန်နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်: လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2.
RealYBOP အားလုံးချန်လှပ် 25 မကြာသေးမီက neuroscience-based စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်, ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့တို့ကရေးသား။ အားလုံး 25 စာတမ်းများကတော့စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
RealYBOP ၏ဤစာရင်းတွင်တိုင်းလေ့လာမှုချန်လှပ် အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များဆီသို့ "ကို un-သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 35 လေ့လာမှုများကျော်။ ဒါဟာယုံကြည်ချက်, သဘောထားနှင့်အပြုအမူအပေါ် porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ် 2016 လေ့လာမှုများ၏ဤ 135 Meta-analysis သည်ချန်လှပ်: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015.
RealYBOP ၏ဤစာရင်းထဲတွင်စာတမ်းများအပေါငျးတို့သပေမယ့်နှစ်ဦးကိုချန်လှပ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 40 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။ : အဆိုပါနှစ်ခုလေ့လာမှုများနီကိုးလ် Prause နှင့်သူ၏ဂရုတစိုက်ထွင်းထုရေး-ups စာဖတ်သူကိုလှည့်ဖြားအလက်ဇန်းဒါးŠtulhoferကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာမှု 1 (Prause et al ။ , 2015 - နောက်တဖန်); Štulhoferအားဖြင့်လေ့လာမှု 2.
RealYBOP ၏ဤစာရင်းထဲတွင်စာတမ်းများအပေါငျးတို့သပေမယ့်သုံးချန်လှပ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 35 လေ့လာမှုများကျော်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သည်3လေ့လာမှုများအလက်ဇန်းဒါးŠtulhofer, ယောရှု Grubbs နှင့်ဂျိမ်းစ် Cantor အားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုများအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်သိပ္ပံ deniers တစ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဥပမာထဲမှာ, တကယ်တော့အားလုံး3စာတမ်းများအတွက်အမှန်တကယ်ဒေတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲအကြားလင့်များအစီရင်ခံ: Štulhoferအားဖြင့်လေ့လာမှု 1; Grubbs အားဖြင့်လေ့လာမှု 2; ဂျိမ်း Cantor အားဖြင့်လေ့လာမှု 3.
RealYBOP ၏အားလုံးပေမယ့်နှစ်ဦးကိုချန်လှပ် လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ "ပဲမြင့်မားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိ" သောစကားအမှတ်တန်ပြန် 26 လေ့လာမှုများ ယခင်စာရင်းထဲတွင်အတု (အတူတူပင်နှစ်ခုစာတမ်းများ: Štulhoferအားဖြင့်လေ့လာမှု; ဂျိမ်း Cantor အားဖြင့်လေ့လာမှု).
RealYBOP ၏ဤစာရင်းထဲတွင်ရှိသမျှသောစာတမ်းများချန်လှပ် ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-စိတ်ခံစားမှုကျန်းမာရေးနှင့်ဆင်းရဲတဲ့သိမြင်မှုရလဒ်များကိုမှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 75 လေ့လာမှုများကျော်။
RealYBOP ၏ဤပြည့်စုံစာရင်းထဲတွင်အားလုံး 250 လေ့လာမှုများချန်လှပ် မြီးကောင်ပေါက်အပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများ။
Sciencearousal ပို့စ်များကို, spam porn စွဲပြန်လည်နာလန်ထူ site ကို reddit / NoFap:
စကားမစပ်, Prause Nofap တည်ထောင်သူအလက်ဇန်းဒါး Rhodes အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်နှောင့်ယှက်နှစ်ပေါင်းများစွာ Prause နှင့် Ley တို့၏သိက္ခာမဲ့သောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောဤကဏ္sectionsများကိုကြည့်ပါ။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ Prause & သူမ၏ sock alias“ PornHelps” သည် Alexander Rhodes ကိုတိုက်ခိုက်သည်၊ သူသည်လိင်မှုကိစ္စပြfနာများကိုအတုလုပ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခဲ့သည်
အောက်တိုဘာလ, 2018: YBOP အပေါ် Prause မဟုတ်မမှန်သူမ၏အမည်အား 35,000 (သို့မဟုတ် 82,000) ကျော်ပုံပေါ်တဲ့ tweet ထဲမှာမလုပ်ပဲကြိမ်
တစ်ပြိုင်နက်တည်း, sciencearousal တစ် post ကိုဖန်တီး, spam porn စွဲပြန်လည်နာလန်ထူ site ကို reddit / pornfree:
Sciencearousal ပို့စ်များကိုအထက်ပါ post ကိုအောက်မှာမှတ်ချက် 17 ။ အတော်များများကမှတ်ချက်များ Wilson ကနှင့်ဤ website ၏အသရေဖျက်မှုနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းပါဝငျသညျ။
ဤမှတ်ချက်အားအီးမေးလ်များ, လူမှုမီဒီယာ၏ရေးသားချက်များမှတူညီဖြစ်တယ်, ဝီကီပီးဒီးယား Prause အားဖြင့်တည်းဖြတ်မှုပေါင်း။ Prause Wilson ကတစ်ဦးမေတ္တာအားဖြင့်ပယ်ပေးဆောင်လျက်ရှိသောဇာတ်လမ်း fabricates ။ မရဒါ, မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်.
မေလ, 2018: Prause MDPI, ဒါဝိဒ်သည် Ley, Neuro သံသယရှိ, ရုပ်သိမ်းခြင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၏အာဒံကို Marcus မှအီးမေးလ်များအတွက်ဂယ်ရီ Wilson ကအကြောင်းကိုတည်ရှိသည်နှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်
"Janey Wilson က" (Prause နှောင့်ယှက်နဲ့ The ဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှရှုတ်ချကြောင်း alias ကို, ဂယ်ရီ Wilson က, Wilson ကရဲ့ထုတ်ဝေသူနှင့်အခြားသူများ) ၏ကြီးစွာသော
ချယ်ရီ-Pick သည် YBOP ဤဆောင်းပါးကိုအတွက်ချယ်ရီ-ခူးဆွတ်အဖြစ် RealYBOP ရဲ့ "ကျွမ်းကျင်သူများက" ၏များစွာသောဖျောထုတျ: porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "porn တွင်သင့်ဦးနှောက်ရီးရဲလ်")
Sciencearousal ရဲ့ "ကျွမ်းကျင်သူ" Wilson ကနှင့်စကော့တလန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းအသရေဖျက်မှုနှင့်အတူဆက်လက်:
ပိုများသောအမှားကိုအမှန်နှင့် Wilson နဲ့ YBOP ၏ကဲ့ရဲ့ခြင်း:
ဘယ်အချိန်မှာဗြောင်ကျကျကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုထွက်သည်ကိုခေါ် Sciencearousal "သရေဖျက်မှု" ၏ ar / pornfree အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကစွပ်စွဲ:
မှတ်ချက်: YourBrainOnPorn.com ဖို့ link ကိုနှစ်ပေါင်းအဲဒီမှာညာဘက် Sidebar မှာရှိခဲ့ပွီးသကဲ့သို့, r / pornfree အပေါ်လူတိုင်း, တရားဝင် YBOP သတိထားဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာထွက်ကိုခေါ် Sciencearousal "သိပ္ပံပညာအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်" ၏ pornfree အဖွဲ့ဝင်စွပ်စွဲခြင်းဖြင့်ဖြေဆိုသူ:
RealYBOP နေဖြင့်ဗြောင်ကျကျကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုထွက်ညွှန်ပြအဖြစ် mischaracterized ဖြစ်ပါတယ် "သိပ္ပံပညာရှင်များတိုက်ခိုက်ခြင်း။ "
Sciencearousal ရဲ့ မှတ်ချက်များကို ပို. ပို. ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်လာ:
မည်သူမဆိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကို“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ကြည့်နေတယ်” ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည် သို့သော်အချို့သော r / pornfree အဖွဲ့ဝင်များကမှတ်ချက်ပေးရန်စဉ်းစားသည် Sciencearousal ရုံချီးမွမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့နှင့် r / pornfree moderator တို့သည် Prause ၏အတိတ်သမိုင်းကြောင်းကို r / pornfree ပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့စေရန် aliases အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ကိုသိထားကြသည်။ Prause သည်စာလုံးနှစ်လုံးပါသောစကားလုံး ၂ လုံးမှ ၄ င်း၏ usernames များကိုထူးဆန်းစွာပြုလုပ်လေ့ရှိသည် GaryWilsonStalker) ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူမ၏ထင်ရှားသောနာမည်ပြောင်များစာရင်းကိုကြည့်ပါ။ အသုံးပြုသူအမည်များနှင့်မှတ်ချက်များကိုပယ်ဖျက်ခဲ့သော်လည်းအကြောင်းအရာပါသောဥပမာအနည်းငယ်ကျန်ရှိသည် (သူမနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သော Nicole Prause ၏ PDF ဖိုင်သည်):
အတော်များများကပိုပြီး (သရုပ်) Prause နာမည်ထိတွေ့နေကြ ဒီမှာနှင့် ဒီမှာ.
မေးတဲ့အခါသူတို့ကဖြစ်စေခြင်းငှါအရာ RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူ" Sciencearousal သားကောင်ကစား:
, RealYBOP တွင်မှအမှားမှဟုဆိုကာဖြစ်ပါတယ် '' အရာ၏အရာစံပြ '' အဖြစ်မေးခွန်းထုတ် Sciencearousal evades:
ဝိသေသလက္ခဏာခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားရန်ဒုတိယအကြိမ်လိုက်တဲ့အခါမေးသော်, Sciencearousal YBOP အဆိုးကိုအဆိုးနှင့်ဖြစ်စဉ်များ fabricating မှအပန်းဖြေ:
, Prause, Ley နှင့်အခြား RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက" ကိုမကြာခဏလုပ်ပေးအချို့ကဲ့သို့ပင် Sciencearousal ဒွန်ဟီလ်တန်, ရော့ Weiss, IITAP နှင့် CSATs disparages:
Prause နှင့် CSAT ရဲ့ဒွန်ဟီလ်တန် MD နှင့်ရော့ Weiss defaming နှင့်နှောင့်ယှက်၏ Ley ရဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်အများအပြားကဏ္ဍများ:
Sciencearousal ကိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပြောနေ, r / NoFap အပေါ်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်တက်လစ်လျူရှုမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းအစစ်အမှန်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ (ရသည်မှာ, porn ကဘတ်စ်ကားအောက်မှာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပစ်ဆိုလိုတယ်ရင်တောင်အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာအကာအကွယ်ပေးရမည်။ )
Prause နှင့် Ley3နှစျကျြောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအပြစ်တင်ဖို့မဲဆွယ်စည်းရုံးနေကြပြီ: Sexologists တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟုဆိုကာခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ငြင်းပယ်ပြဿနာ (2016) ဖြစ်ပါသည်, တစ်ပြိုင်နက် porn-related ပြဿနာများကိုဖော်ပြမည်သူမဆို Anti-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြောင်းထားခြင်းနေစဉ်။ (ဟမ်?)
Sciencearousal r / NoFap တစ်ဖန်ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုနဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းယောက်ျားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေအပေါ်, အစစ်အမှန်တရားခံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မဟုတ်မမှန်7ဓာတ်ခွဲခန်းများလွတ်လပ်စွာ (ရိုးရိုးသစ္စာကိုဖျက်) သူမ၏အခိုင်အမာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီဆိုပါတယ်။
လျှော့ရလဒ်များတိုးတက်ကြောင်းရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်ဒေတာကြောင့်ဒီစာမျက်နှာပေါ်ပထမဦးဆုံး9လေ့လာမှုများကိုတွေ့မြင်: အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသရုပ်ပြသည့်လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော် ဖြစ်စေတဲ့ အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကို.
ဇွန်လ 7th, 2019: realyourbrainonporn twitter အကောင့် တစ်ဦးပေါ်နှင့် reddit အသုံးပြုသူ scienceofarousal ညှိတက် သူတို့အစပျိုး smear မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။ ရပါတယ် မဟုတ်မမှန်တောင်းဆိုမှုများ သည် "Anti-porn" လှုပ်ရှားမှုအမုန်းအုပ်စုများအတွက်အမြစ်တွယ်နေပါတယ်။
As RealYBOP tweeting ခဲ့သည်အဆိုပါ RealYBOP Reddit အကောင့် (အသုံးပြုသူ / sciencearousal), အ Kuznia ဆောင်းပါးနှင့်အတူ, r / nofap spamming, r / nofap တစ်ဦးမုန်းတီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ခဲ့သည်:
Sciencearousal (Prause) မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတစ် uncharacteristically ရိုးရိုးသားသားအဖြေဖြစ်ပေါ်လာသောအဘယ်အရာနှင့်အတူသူမ၏ post ကိုဖွင့်နောက်တော်သို့လိုက်:
သို့သော်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆန်းစစ်ခြင်းသည် Prause & Ley ၏အချိန်ကုန်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးဝါဒဖြန့်မှုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သော Gary Wilson ၏ TEDx ဟောပြောချက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ၂၀၁၆ David Duke ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖော်ပြသည်။ Ley နှင့် Prause သည် Wilson အား Duke နှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားသည်ဟူသော (မှားယွင်းသော) အကြံပြုချက်ကိုထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါကဘာလဲ sciencearousal (ဖျက်ခံရဖို့မမျှော်လင့်) သူမ၏ oh-ဒါ-ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှတ်ချက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ် ploy ။
အားလုံးစင်း၏ရှေးရှေးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆက်စပ် (နှင့်အကြံပြုထားသည်) ရှိသည်ဟုဒါ Wilson ကရဲ့ TEDx ဟောပြောပွဲ ", Wilson ကရဲ့ဆွေးနွေးချက်တချို့ 11 သန်းအမြင်များရှိပါတယ်မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု။ အဖြူ supremacist "ဘယ်လိုဒီအဖြစ်ဂယ်ရီ Wilson က ဆက်စပ်. အပါဘူး"? "ဒါဟာသင်တန်း၏, မပေးပါဘူး။ ဒါဟာရယ်စရာအခိုင်အမာဟစ်တလာသည်သူ၏ခွေးကိုချစ်သောကြောင့်အားလုံးခွေးချစ်သူများနာဇီဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုကဲ့သို့ဖြစ်၏။
အဆိုပါ “ RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများ” ဝီကီပီးဒီးယားကိုတည်းဖြတ်ရန် aliases နှစ်ခုဖန်တီးပါ။ link များထည့်ပါ စစ်မှန်သောYourBrainOnPorn.com ညစ်ညမ်းရဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုတရားဝင်ပစ္စည်းကိုဖျက်နေစဉ်။
ဧပြီလ 24th, ထိုတွင် Sciencearousal အသုံးပြုသူအမည် Wikipedia တွင်ပေါ်လာသည်၊ RealYourBrainOnporn.com သို့ link များထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ပတ်သက်သောတရားဝင်အချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်သည်။ ဤသည်မှာ Sciencearousal ၏ alias တစ်ခုအနေဖြင့်ပထမဆုံးကြိုးပမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ (SecondaryEd2020) Aprilပြီလ 17 ရက်နေ့တွင်အလားတူလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဝီကီပီးဒီးယား၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ sock-puppets ကိုတားမြစ်ထားသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းသောပိုစတာပိုစတာများသည်၎င်း၏စည်းမျဉ်းများမှကင်းလွတ်သည်။သူမနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သော Nicole Prause ၏ PDF ဖိုင်သည်) ။ ၏ဖန်သားပြင် ညစ်ညမ်းဝီကီပီးဒီးယားဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာ နှင့် SecondaryEd2020 နှင့် Sciencearousalအခြားဝီကီပီးဒီးယားအယ်ဒီတာများအားသူမအား“ RealYourBrainOnPorn.com” ကိုကိုးကားရန်ခွင့်ပြုခြင်း။
5 14 ဧပြီလ 2019 အပေါ် semi-protected ပြင်ဆင်ရန်တောင်းဆိုမှုကို
6 25 ဧပြီလ 2019 အပေါ် semi-protected ပြင်ဆင်ရန်တောင်းဆိုမှုကို
နောက်ဆုံးတော့ဝီကီပီးဒီးယားနှစ်ဦးစလုံးကိုပိတ်ပင်ခဲ့ Sciencearousal နှင့် SecondaryEd2020 NeuroSex / Prause (တော်တော်များများပိုပြီး sockpuppets နေဆဲစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်) ၏ sockpuppets အဖြစ်: wikipedia.org/wiki/Category:Wikipedia_sockpuppets_of_NeuroSex။ (ဤ2စာမျက်နှာများတွင်သူမကိုဝါဒဖြန့်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရဖျက်ဖို့ created နီကိုးလ် Prause ၏ 20 သိသာတရားမဝင် SOCKS-ရုပ်သေး, ကျော်မှတ်တမ်းတင်: စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2.)
ကျနော်တို့ကနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားများကိုတင်ပြ Sciencearousal နှင့် SecondaryEd2020 နှင့် NeuroSex အားလုံး Prause ဖြစ်ကြသည်။
ဧပြီလ 14, 2019: SecondaryEd2020 “ RealYourBrainOnPorn.com” ကို Pornography စွဲလမ်း Wikipedia Wikipedia သို့ထည့်ရန်ကြိုးစားခြင်း:
အနည်းငယ်တစ်ဦးရက်အတွင်း SecondaryEd2020 သေးအဖြစ်ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည် NeuroSex ၏အခြား sockpuppet (Prause) - သို့သော်၎င်းသည် Prause အားအခြား supppuppet တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Prause created Sciencearousal, အဆိုပါညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ် ပစ္စည်းကအခြား Prause sockpuppets နေဖြင့်ယခင်တည်းဖြတ် mirroring အတူ။ ဥပမာ, Sciencearousal (စွဲအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များကကောင်းစွာသိကြအာရုံကြောလေ့လာမှုများဖျက်compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ (Kraus et al ။, 2016); Hypersexual Disorder နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုးတန်း Dysregulation (Chatzittofis, 2015):
Sciencearousal နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော ၂၀၁၆ AASECT ကြေငြာချက်ကိုထည့်သွင်းထားသည် (လိင်အစွဲစွဲလမ်းမှုမရှိဟု) နှင့်အမေရိကရှိထိပ်တန်းစွဲကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များကိုရှုတ်ချသည်။ စွဲလမ်းဆေးပညာ၏ American Society (ASAM) ။ မြောက်မြားစွာ Prause sockpuppets အတူတူပင်တည်းဖြတ်ဖြည့်စွက်ကြပါပြီ။
ဒါဟာ AASECT တစ်သိပ္ပံနည်းကျအဖှဲ့အစညျးမဟုတျကွောငျးဖျောပွထားသညျ့နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအခိုင်အမာထောက်ပံ့ပေးရန်ဘာမျှမကိုးကားရပါမည် - က၎င်း၏ထင်မြင်ချက်ကိုအနတ္တ rendering ။ အာရုန်သည်ဤသည်၌ဝန်ခံအဖြစ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ AASECT ရဲ့ကွှေးကျွောခွငျးမိုက်ကယ်အာရုန်နှင့်သိက္ခာမဲ့ "ပြောက်ကျားနည်းဗျူဟာ" ကို အသုံးပြု. အနည်းငယ်သည်အခြား AASECT အဖွဲ့ဝင်များကတဆင့်တွန်းပို့ခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ post: analysis: ဘယ်လို AASECT လိင်စွဲလမ်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက် Created ခဲ့။ AASECT ၏ ၀ ါဒဖြန့်ချိမှုကိုတိကျမှန်ကန်စွာစာရင်းပြုစုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် - လိင်စွဲလမ်းပေါ်ဒီကုဒ်ဒါ AASECT ရဲ့ "ရာထူး, ဒီနေရာမှာတစ်ဦးပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်မျှော်လင့်ဖို့င်, အခြားရွေးချယ်စရာအချက်အလက်: AASECT နှင့်ဆန့်ကျင်လိင်စွဲလမ်း Rantနှင့် လိင် / Porn စွဲပေါ်တွင် AASECT ရာထူးဖော်ပြချက်မှပျေါထှနျး Backstory.
မိမိကိုယ်ကိုကွာပေးခြင်း, Sciencearousal နှစ်ခုနီကိုးလ် Prause စာတမ်းများဖြည့်စွက် (1): အဆိုပါညစ်ညမ်းစွဲစာမျက်နှာ '' Porn စွဲ '' နှင့်အတူတသမတ်တည်းရှိမနေသောပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ Module (Prause et al ။, 2015)နှင့် လေ့လာခြင်း ( "ဒေတာများကိုစွဲလမ်းအဖြစ်လိင်ကိုထောကျပံ့ဘူး"Prause et al။ , 2017)
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သည်ဤ2စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ထိတွေ့နှစ်ဦးစလုံးစာတမ်းများ:
Sciencearousal သည် Prause ၏အခြားစွဲလမ်းမှုကိုပြုပြင်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ပညာရေးဆိုင်ရာထုတ်ဝေသူ MDPI ၏ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာ။ တခြားနေရာကတခြားရှင်းပြသည့်အတိုင်း Prause (1) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ MDPI နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ (အခြားစာရေးသူများကစာတမ်းများရာပေါင်းများစွာကြားတွင်သူတို့သူမ၏အားဖြင့်စာတမ်းများဆွေးနွေးကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်,) Prause နှင့်အတူသဘောမတူကြောင်းနှစ်ခုဆောင်းပါးများထုတ်ဝေ, နှင့် (2) ဂယ်ရီ Wilson ကတစ် Co-ရေးသားသူဖြစ်ပါသည် ပန်းခြံ et al ။, 2016 ။ Prause, Wilson က cyberstalking နှင့် defaming ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိပါတယ် ဤသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်စာမျက်နှာမှာရက်ပိုင်း။ နှစ်ခုစာတမ်းများ:
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (et al Love ။ , 2015)
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (ပန်းခြံ et al ။ , 2016)
Prause ချက်ချင်း MDPI ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ကြောင်းအခိုင်အမာ ပန်းခြံ et al ။ , 2016။ တဦးတည်းမနှစ်သက်ပညာဆောင်းပါးများဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တုံ့ပြန်မှုတစ်စုံတစ်ရာကန့်ကွက်ရှင်းလင်းမှတ်ချက်ထုတ်ဝေရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံရဲ့ မိဘကုမ္ပဏီ, MDPI, ဒီလုပ်ဖို့ Prause ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အဲဒီအစားတရားဝင်မှတ်ချက်ထုတ်ဝေ၏သူမကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာမှလှည့် (နှင့်အများဆုံးမကြာသေးမီက ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းသို့ MDPI bully မှဘလော့ဂ်) ပန်းခြံ et al ။ငါ (နှစ်ခုဆီးရောဂါပါရဂူနှစ်ဦးစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အပါအဝင်)7အမေရိကန်ရေတပ်သမားနှင့်အတူပူးတွဲရေးသားသူဖြစ်ကြောင်းကိုအရာ၏။ ထို့အပြင်သူမသည်အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံးနှင့်အတူတိုင်တန်းတရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း MDPI အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ သူမသည်ထို့နောက်အပေါငျးတို့သဆရာဝန်များက '' ဆေးဘက်ပျဉ်ပြားနှင့်တိုင်ကြားချက်များတင်သွင်း။ သူမသည်ကိုလည်းစက္ကူရဲ့စာရေးဆရာများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်အမှားမရှိသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရသည့်ရှည်, စေ့စေ့စပ်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု, ဖြစ်စေတဲ့, ဆရာဝန်တွေ '' ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ဖိအားပေး။
Prause သည် COPE (ပြည်သူ့ရေးရာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကော်မတီ) သို့ထပ်ခါတလဲလဲတိုင်ကြားခဲ့သည်။ COPE သည် MDPI ကို“ လူနာများသဘောတူခွင့်ပြုချက်မရရှိခဲ့ခြင်း” ကို အခြေခံ၍ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ MOTI ဆိုင်ရာစုံစမ်းမေးမြန်းမှုဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်။ MDPI သည်စာတမ်းရေးသားသူဆရာ ၀ န်များ၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်သဘောတူညီချက်ရယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အမေရိကန်ရေတပ်မူဝါဒများအားပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ Prause တွင်၎င်းနှင့်အတူပူးတွဲရေးသားသူဝီလ်ဆင်နှင့်ပတ်သက်သောမှားယွင်းမှုများကိုဖြည့်စွက်ရန် MDPI Wikipedia စာမျက်နှာများကိုတည်းဖြတ်ရန် alias အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ နှင့်စက္ကူ။ အများကြီးပိုကြည့်ရန်၊ 2015 မှတဆင့် 2019 မှ: အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ (။ ပန်းခြံ et al, 2016) ပြန်ရုတ်သိမ်းရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့အားထုတ်မှု။
အောက်တွင် Prause ၏ဥပမာ (ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ Sciencearousal) သူမ၏ပုံမှန်အတိုင်း drivel ထည့်။ ပထမဦးစွာသူမ နော်ဝေမှတ်ပုံတင်မည်ကအမှားထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့MDPI ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပုံမှန်“ 1” မှ“ 0” သို့မတော်တဆအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သော၊
အဆိုပါလျှော့ချအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဟာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အမှားဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ခဲ့ ရှည် MDPI ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖြေရှင်းခဲ့။ Prause သုညအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဟာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အမှားဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသိသော်လည်း, သူမ ပြီးခဲ့သည့်လက Tweet လုပ်ခဲ့ MDPI သည်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျပြီး MDPI သည်မတော်မတရားပြုသည့်ဂျာနယ်ဖြစ်သည် (နှစ် ဦး စလုံးသည်မှားယွင်း။ နှစ်ခုလုံးသည် Sciencearousal ၏ Wikipedia edit တွင်ဖြစ်သည်)
Prause (အဖြစ် Sciencearousal) လည်း ဆက်စပ်သောအမှားကိုအမှန်သူမ၏ပုံမှန်အတိုင်း set ကိုဖြည့်စွက် ပန်းခြံ et al ။ , 2016 နှင့်ဂယ်ရီ Wilson က:
နောက်ဆုံးမှာ Wikipedia ကိုပိတ်ပင်လိုက်သည် Sciencearousal တစ် ဦး အဖြစ် “ NeuroSex” ၏ 8 sockpuppets ။ မှ Sciencearousal ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာ:
နှင့် NeuroSex ကနီကိုးလ်ချီးမွမ်း:
မေလ 5, 2109: Sciencearousal NeuroSex တစ် sockpuppet အဖြစ်သူမ၏ပိတ်ပင်မှုစိတျဝငျစား။ ဝီကီပီးဒီးယားသူတို့ (သူတို့သူမကလဲလျောင်းနေသည်ကိုသိ) မျှအမှားလုပ်သူမ၏အကြောင်းကြား:
ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်တော်သူမဝီကီပီးဒီးယားကိုတည်းဖြတ်ရန်အသုံးပြုထားပါတယ်မှာအနည်းဆုံး 40 သည်အခြားဖြစ်နိုင်ဖွယ် sockpuppets သိ:
ကျနော်တို့မသိသောများစွာသောနောက်ထပ်ဖြစ်ကောင်းရှိပါတယ် ... ။ လာရန်များစွာ။ သူမ၏ Wikipedia sockpuppets (aliases) အချို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော Prause စာမျက်နှာအချို့။
မေ ၂၀၁၈ မေ - MDPI ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်ရန် Prause သည် sock-puppets များစွာကိုဖန်တီးပြီး (sock-puppetry & defamation အတွက်ပိတ်ပင်ထားသည်)
"Janey Wilson က" (Prause alias ကို) ၏ကြီးစွာသော
ဧပြီလ 2016: တစ်ဦးကနီကိုးလ် Prause SOCKS ရုပ်သေးဟာ Belinda Luscombe ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာတည်းဖြတ်မှုပေါင်း
ဖေဖော်ဝါရီလ 2019: Prause မဟုတ်မမှန်လိမ်လည်မှုထှကျမွောကျရာ Cry စွပ်စွဲပါတယ်။ CEO ဖြစ်သူရဲ့ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်ရန်တွေ့မြင်, (spurious အကြောင်းပြချက်များအတွက်) သည်မစ်ဆူရီရှေ့နေချုပ်မှ non-အမြတ်အစီရင်ခံရန် Twitter ကိုနောက်လိုက်မေးတယ်
Prause သည်သူမပြင်ဆင်ထားသော YouTube alias ကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။အမှန်တရားကိုသင်အခမဲ့သတ်မှတ်ပါ။သူမရဲ့သားကောင်များအဖြစ်အပျက်များကိုပျံ့နှံ့နေချိန်မှာသူမရဲ့ပုံမှန်ပစ်မှတ်များကိုရှုတ်ချခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်း။
၂၀၁၁ မေလ ၁ ရက်သည်ချိုးဖောက်ရာနေရာ၏နောက်ကွယ်ရှိသူများထံသို့စာများကိုရပ်ဆိုင်းပြီးရပ်ဆိုင်းလိုက်သည် “ RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများ”).
၂၀၁၁ ခုနှစ်မေလ ၁ ရက်နေ့တွင်ကုန်သွယ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်“ Your Brain On Born” နှင့်“ YourBrainOnPorn.com” (ဤဝက်ဘ်ဆိုက်) မှသာမန်ဥပဒေပိုင်ရှင်၏ရှေ့နေများသည်ချိုးဖောက်ရာဆိုက်နောက်ကွယ်ရှိပုံရသူအားလုံးကိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာပေးခဲ့သည်။ (the "ကျွမ်းကျင်သူများက") ။ တစ်ဦးကစက္ကန့်စာတစ်စောင်ကိုလည်းဒေါက်တာ Prause သူမ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်-squatting စွန့်လွှတ်ကြောင်းတောင်းဆိုနေပြီ လြှောကျလှာ "Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်" ဟုအဆိုပါအမှတ်အဘို့နှင့် "YourBrainOnPorn.com ။ " ၂၀၁၆ မေလ ၁ ရက်၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ နီကိုးလ်အားဖြည့်စွက်ရန်အက္ခရာ၏ PDF ကိုပိတ်ပါ
Gary Wilson ၏ရပ်စဲခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းစာ၏ဖန်သားပြင်များ။
ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သူ Lynn Comella ၏ C & D စာတိုကိုတွစ်တာမှတုန့်ပြန်ချက်မှာဤစကားသည်သူမ၏လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုနှိမ်နင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာဖွင့်ထားသည်။ PornHelp.org Comella ပညာပေး။ နောက်ဆုံးတော့ RealYBOP သာ Prause အစဉ်အဆက်ပို့စ်များကို link တစ်ခုနှင့်အတူတုံ့ပြန်:
ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲ Prause အားဖြင့်ရှိခဲ့ပွီးသကဲ့သို့အဟောင်း CBC link ကို, RealYBOP အားဖြင့် mischaracterized ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Prause လူသိရှင်ကြား ... လိင်တံ၏အရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်ပြီးဂယ်ရီ Wilson ကတောင်းဆိုနေတာနှင့်ဤမျှလောက်ပို Prause ရဲ့တွစ်တာအကောင့်များပါဝင်သည်အရာ၏အခြားပျေါလှငျအပြီးအပိုင်ပိတ်ပင်ထားခံရခြင်း, တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျား Saga ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုပါ:
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃ - သင်၏ဘရိန်းဘားတွင်ရေးသားခြင်းကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်သူ၏လိင်တံအရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍ (Prause ၏ Wilson အားခေါ်ဆိုခြင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်အခြားသောအခြားသူများ၊ မှားယွင်းစွာမှားယွင်းစွာပြောဆိုသူများ) ကို Gary Wilson အားမေးမြန်းခဲ့သည်။
တူညီသောလင်း Comella ချည်တွင် PornHelp.org တစ်ရှုပ်ထွေးပါရဂူဘွဲ့ပညာပေး:
YBOP ၏ကျွမ်းကျင်သူဗစ်တိုးရီးယားဟတ်မန်း အဆိုပါတိရစ်ဆာနျပူးပေါင်းမည်: "လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခြင်း" အကြောင်းတူညီသော drivel ဖြင့်:
YBOP ၏ကျွမ်းကျင်သူရော်ဂျာလဘီ “ ခြိမ်းခြောက်မှု” နှင့်“ ကောင်းသောသိပ္ပံပညာ” ဟုဆိုကာအပြိုင်အဆိုင်ပူးပေါင်းမှု:
ဂယ်ရီ Wilson ကအဆိုးကိုအဆိုးနဲ့ Chris Donaghue နေဖြင့်တစ်ဦးက tweet, အကြာတွင်ဖျက်ပစ်ခဲ့သည်:
စစ်မှန်သော YBOP“ ကျွမ်းကျင်သူ” ဒါဝိဒ်သည် Ley တုံ့ပြန်သူသည်ပုံမှန်အားဖြင့်“ ခြိမ်းခြောက်မှု” ခံရသည်ဟုပြောဆိုခြင်း (ဤနှစ်များတစ်လျှောက်လုံးတွင်ခြိမ်းခြောက်မှု၏တရားဝင်ဥပမာကိုတစ်ခါမျှမပြခဲ့ပါ) ။ RealYBOP တွစ်တာ“ ၁၀၀%” -
Ley ဆက်လက်: (နောက်ပိုင်းဖျက်လိုက်သည်) -
RealYBOP (Prause) ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားဖို့သူမ၏မဟာမိတ်များ၏တဦးတည်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်:
RealYBOP တုံ့ပြန် သူမ၏ပုံမှန်အတိုင်းစတိုင်:
Prause & RealYBOP သည်အချင်းချင်း၏ tweets များကိုထင်ဟပ်ပြသသည်။
RealYBOP Wilson ကဆန့်ကျင်သူမ၏သောင်းကျန်းဆက်လက်:
tweet အထက်တွင် Prause နေဖြင့်အစောပိုင်းက tweets2နီးပါးတူညီသည်။
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်သတင်းစာဆရာအောက်ပါတောင်းဆိုချက်ကိုနှင့်အတူမေလ 22, 2019 အပေါ်ဂယ်ရီ Wilson ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရာသူကို Tracy Clark က-Flory, သည်:
“ ငါဒီနေ့မင်းနဲ့စကားပြောဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့ယေဇဗေလမှာသတင်းထောက်ပါ။ မကြာသေးမီကသင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ရှိသင့် ဦး နှောက်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်များအကြားပconflictိပက္ခအကြောင်းကိုစာရေးနေစဉ်ငါဖုန်းဖြင့်ခေတ္တစကားပြောရန်မျှော်လင့်နေသည်။ ”
Clark-Flory သည် Prause ၏အဓိကဇာတ်လမ်းကို Gary Wilson နှင့်မတိုင်မီ (၃) ပတ်ခန့် (ပုံပြင်ကိုထုတ်ဝေရန်မတိုင်မီ) တွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤအသိပေးချက်သည်အောက်ခြေတွင်ပေါ်နေသည် အတော်ကြာ RealYBOP စာမကျြနှာ “ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည် Gary Wilson ၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီထံမှအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် (၂၀၁၁ မေလ ၁ ရက်)
အကယ်၍ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါက Clark-Flory ၏ဆောင်းပါးသည် Ley & Prause မှသူမကျွေးမွေးခဲ့သောဖြစ်ရပ်များမှစိတ်ကူးယဉ်မှတ်တမ်းတစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသံသယမရှိပါ။ Clark-Flory သည် Prause နှင့် Ley တို့၏အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံအားပေးသည့်အဖြစ်အပျက်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှု၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆက်နွယ်နေသော Clark-Flory ၏ဥပမာအချို့။
အစိုးရကညစ်ညမ်း screwing သလဲ?
လူကလေး mags အပေါ်စစ်ပွဲ
ပညာရှင်များ porn မ
အစီရင်ခံစာ: လိင်စွဲ BS ဖြစ်ပါသည်
လေ့လာမှု - Porn ကြယ်များသည်“ ပျက်စီးခြင်းမရှိ”
GOP, ငါ့ porn ကိုချွတ်လက်!
Santorum porn တိုက်ခိုက်ရန်လေးတွေသုံးပြီးဖြစ်ပါတယ်
porn အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အသစ်ဖောက် - အမျိုးသမီး
Porn ကိုဆန့်ကျင်သောကွန်ဆာဗေးတစ်များက Porn Performer ၏တက္ကသိုလ်မိန့်ခွန်းကိုစကားမပြောနိုင်သောအရှုပ်တော်ပုံသို့ပြောင်းလဲလိုက်သည်
လိင်အလုပ်သမားများအား Halsey ၏ပံ့ပိုးမှုသည်လူကုန်ကူးမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ
Instagram မှ Porn အဆိုတော်များအားရှင်းလင်းရန် Troll ၏ကြိုးပမ်းမှု
အဆိုပါ Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဒါဟာ HIV ပိုးအပြုသဘောဆောင်သောဖျော်ဖြေမှုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဘယ်လို Rethinking သည်
'ဒါဟာအတိအကျ Pee' - အံ့သြစရာကောင်းတဲ့၊ Pedialyte ဖြင့်လောင်ကျွမ်းတဲ့အနုပညာက Porn မှာ Squirting
ဤသည် 1748 ခေါ်ဆောင်သွား Novell သေချာတာပေါ့တစ်ဦးဒစ်ခ်ဖော်ပြပါနိုငျ!
ရုံ Porn ပိတ်ပင်ခံရဘယ် IP ကို ​​Tumblr သည်,
Marilyn Monroe ၏ Hugh Hefner ၏မိတ္တူ Playboy'' အပူတပြင်း 'ဝတ်လစ်စလစ်ထဲသို့တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်များအတွက်လေလံတက်သည်
'Feminist' Porn သည် #MeToo Moment ကိုရပြီလား။
လိင်လုပ်သားများနှင့်မဟာမိတ်များမှ #Stripper ကို Instagram မှဆင်ဆာဖြတ်ခြင်း
Shutterstock အဆိုအရ, Porn Watch လုပ်နည်း
'Dwayne Johnson' နှင့် 'DJ Khaled' porn ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်လူအများမြင်တွေ့လိုသောကြောင့်စားချင်သောကြောင့်တက်ကြွနေသည်
Erika Lust ကသူမသည်“ ထုတ်လုပ်မှု” နှင့် ပတ်သက်၍“ ကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာ” အခြားနည်းလမ်းရှိသည်ဟုဆိုသည်
စိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးမှုနှင့်အဆီ-အရှက်ကွဲခြင်းကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် Feminist Porn ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွင်းပိုင်း
SESTA နှင့်နိုင်ငံရေးခြိမ်းခြောက်မှု, ထပ်မံကျဘို့လိင်လုပ်သားအဖွဲ့အစည်းများ Brace ရင်ဆိုင်ခြင်း
စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းများ၊ စိတ်ချရသောစကားလုံးများနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအော်ဂဇင်များ - 'ကြမ်းတမ်းသော' အညွန့်ရိုက်စဉ်အတွင်းဒါရိုက်တာများကသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုဘယ်လိုရယူကြသလဲ။
ကောလိပ်ကျောင်းသားများအဘို့အ Pornhub မိတ်ဆက် $ 25k လိင်သုတေသန Grant က
RealYBOP သည်ဒေးဗစ်လိုင်၏ ၂ ပတ်ကြာသရေဖျက်မှုဖြင့်ရေးသားထားသောစာတွင်“ YBOP ရှိရှေးရှေးများသည်သူ့အသက်ကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်” ဟုထူးထူးခြားခြားဖော်ပြခဲ့သည်။ (ဒီမှားယွင်းသောပြစ်မှု - စွပ်စွဲချက်တစ်ခု "အသရေဖျက်မှု per se" တရားစွဲဆိုမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်)
RealYBOP Wilson ကတစ်ရုပ်သေးအကောင့်ရှိပြီးမလုပ်ပဲ (သူမ) နှင့်သင်တန်း၏ဤစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်သေးအကောင့်သို့လင့်ထားသည်ပျက်ကွက်။
tag ကို-အသင်းကစား Prause အဆိုပါတွစ်တာ-ကျမ်းပိုဒ်မှသူမ၏ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်မှုထောက်ပံ့:
ငါတို့ရှိသမျှသည်ပါဘူး။ သို့သော်ဖြစ်ကောင်းသူမကကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဥပဒ ... အဖြစ် 1st ပြင်ဆင်ရေးကိုဖတ်သင့်ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ Prause သည် Yerbop ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တရားစွဲဆိုမှုစာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူ troll NerdyKinkyCommie ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ NerdyKinkyCommie သည်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ & RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများက သူတို့ရဲ့မုသာစကားများဖြည့်စွက်သည်သူ၏အသရေဖျက်မှု tweets ဖြန့်ဝေ
နောက်ခံသမိုင်း: အဘယ်သူ၏တွစ်တာလက်ကိုင်ဖြစ်ပါတယ် NerdyKinkyCommie, @SexualSocialistတစ်ဦးတီထွင်ခဲ့တယ် trolls ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေအံ့သောငှါအကြံပြုသူမည်သူမဆိုနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် defaming အတွက်ညစ်ညမ်းနဲ့လိင်နှင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းနှင့်အတူစွဲလမ်းလျက်ရှိမှဝန်ခံသည်။ သူ့အကြိုက်ဆုံးပစ်မှတ်တွေထဲမှာအလက်ဇန်းဒါး Rhodes, NoFap, The New မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်, ဂယ်ရီ Wilson ကများနှင့်ညစ်ညမ်း-related အခက်အခဲကနေပြန်လည်နာလန်ထူအတွက်လူဖြစ်ကြ၏။ Nerdy ရဲ့မူလတွစ်တာအကောင့်ကိုအပြီးတိုင် Fight The New မူးယစ်ဆေး (Prause ရဲ့မူလအကောင့်မဆုတ်မနစ်နှောင့်ယှက်ဘို့ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည် လည်းနှောင့်ယှက်ဘို့ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်) ။ Twitter ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်၌၎င်း, ကိုယ့် Prause ကဲ့သို့ Nerdy trolls အသစ်တစ်ခုတွစ်တာအကောင့်ဖန်တီး: https://twitter.com/SexualSocialist
NerdyKinkyCommie သည် Ley၊ RealYBOP နှင့် Prause ဝါဒဖြန့်မှုများကိုမကြာခဏပြန်လည်ရေးသားလေ့ရှိသည်။ Prause, Ley နှင့် Nerdy တို့သည်အထက်ဖော်ပြပါရည်မှန်းချက်များအတွက်မိမိတို့၏အထင်အမြင်သေးမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ဖော်ရွေစွာပြုမူဆက်ဆံကြသည်။ ဇွန်လနှင့်ဇူလိုင်လများတွင် NerdyKinkyCommie သည် Gary Wilson အားနာဇီများ၊ အဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒီများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချည်းနှီးကြိုးစားနေသည့် Prause & Ley ၏ရွံရှာဖွယ်တွစ်တာနှင့်မျက်နှာပြင်များနှင့်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပို့သည့်အရာများအားဂယ်ရီ Wilson အားချည်နှောင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောတွစ်တာအမြောက်အမြား၏ဥပမာတစ်ခုမှာ -
Prause ရဲ့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ပူးပေါင်း NerdyKinkyCommie နှင့်အတူ Nerdy များအတွက်7ရက်ကြာတွစ်တာ-ပိတ်ပင်မှုအတွက်ရလဒ်:
Wilson ကနောက်ဆုံးမှာတွစ်တာတို့ကတစ်ပါတ်မှုအတွက်ပိတ်ပင်ထားခဲ့တဲ့ NerdyKinkyCommie, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သူသည်ဤအချိန် Prause, အ RealYBOP တွစ်တာအကောင့်နှင့် RealYBOP အားဖြင့်ကူညီခဲ့, ပယ် left ရှိရာပိတ်ပင်မှုပြီးနောက် NerdyKinkyCommie ဆက်လက် "ကျွမ်းကျင်သူများက။ "
ဇူလိုင်လ 21 တွင် ဒါဝိဒ်သည် Ley tweets Wilson ကရှုတ်ချကြောင်း Nerdy ရဲ့ချည်မျှင်အတွက်:
နက်ဖြန်နေ့၌ NerdyKinkyCommie အများဆုံးဆက်ဆက်နီကိုးလ် Prause အားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော tweet ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာမဟုတ်မမှန်အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်း (Prause ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာနှင့်ဝီကီပီးဒီးယားပေါ်မှာထပ်, 2016 ၌ဤမုသားကွံ) ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခံရ Wilson ကစွပ်စွဲ
ပုံရိပ်တစ်ဦး၏ဖြစ်ပါသည် YourBrainOnPorn ဗြိတိန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Prause ချိုးဖေါက်မှုတခုကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်လျှောက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ကြသောကြောင့်, Wilson ကအသုံးပြုပုံ Prause ရဲ့ရှေ့နေတွေပေး, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုကိစ္စများတွင်လိုအပ်သောဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အဘယ်အရာကိုအထက်ပါစခရင်ပုံအမှန်တကယ်ပြသထားတယ်: ဂယ်ရီ Wilson ကယ့်ဗြိတိန်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခေတ္တနှင့် Wilson ကယ့်ပိုက်ဆံသုံးပြီးအဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်း (တစ်ဦးကိုဗြိတိန်ပရဟိတ) ကိုဗြိတိန်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် YourBrainOnPorn ဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကပေးချေ။ ဗြိတိန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့် YBOP ပိတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားနေ Prause ဖို့တုန့်ပြန်ခဲ့:
အဖြစ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တခြားနေရာ Wilson ကရှင်းပြခဲ့ သူ့စာအုပ်များ၏ရရှိသောလှူဒါန်း အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှရန်။ Wilson ကငွေမရှိသောလက်ခံ, သူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုမဆိုဘို့တစ် Dime လက်ခံရရှိဘယ်တော့မှသိရသည်။ YBOP ကြော်ငြာမပါလက်ခံနှင့် Wilson ကစကားပြောစရာအခကြေးငွေကိုလက်ခံခဲ့ပါသည်။ ဤအကဏ္ဍများအတွက်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်, Prause Wilson ကသူမှသူ့စာအုပ်ရရှိသောလှူဒါန်းတူညီသောမေတ္တာအားဖြင့်ပေးဆောင်လျက်ရှိသောရေဖျက်မှုနတ်သမီးပုံပြင်ဆောက်လုပ်ထားပြီ
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် Nikky နှင့် Nerdy တို့သည်သက်သေပြနိုင်သောအသရေဖျက်မှုတွင်ပါ ၀ င်နေကြသည် (ထပ်ခါတလဲလဲ Prause က Nerdy အားသူ၏မှားယွင်းစွာရေးသားထားသော tweet အတွက်“ အထောက်အထား” ကိုပေးခဲ့သည်) ။ ထိုအခါ RealYBOP၊ RealYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” နှင့်ကောင်းမွန်သော PornHub ဟောင်းများပေါ်တက်လာသည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် RealYBOP (Prause) ချက်ချင်း Nerdy ၏မုသာ retweeting, သူ့ကိုယ်ပိုင် (RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူ" ဖြည့်စွက် ရော်ဂျာ Libby ကိုလည်း comments):
အားလုံးမုသာစကား။ RealYBOP မှတ်ပုံတင် non-profit မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့လုံးကိုကျွမ်းကျင်သူများက RealYBOP အပေါ်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို advertise ။ ထို့အပြင်, ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်အခြားနှစ်ဦးကို RealYourBrainOnPorn.com "ကျွမ်းကျင်သူများက" (Justin Lehmiller နဲ့ Chris Donaghue) ပေးဆောင်လျက်ရှိသည် xHamster ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်! သင် RealYBOP ISN ရဲ့ဘက်လိုက်ယုံကြည်ပါက, သူတို့ရဲ့ tweets ထုတ်စစ်ဆေး, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဒါခေါ် "သုတေသနစာမျက်နှာ "။ အခြား RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက" တရားဝင် YBOP, Wilson က, နှင့် The ဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ defaming အတွက် NerdyKinkCommie ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ "ကျွမ်းကျင်သူ" ဗစ်တိုးရီးယား Hartmann:
ထို့နောက်သင်တန်း၏, ဒါဝိဒ်သည် Ley:
တေလာ Kohut () စမတ် Lab ကအဖြစ်ခဲ, အဘယ်သူသည် tweets
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့သည် PornHubတစ် RealYBOP မဟာမိတ်တို့သည်အသေရေဖျက် tweet "like နှိပ်" (PornHub ရဲ့ဒုတိယတွစ်တာအကောင့်ခဲ့သည် ဒါကြောင့်သည်ထင်ရှားလာသောအခါ RealYBOp ရဲ့အသစ်တွစ်တာအကောင့်နှင့်က်ဘ်ဆိုက်) အကြောင်းကို tweet မှ:
Hmmm ... PornHub, Prause, Ley နှင့် Hartmann အားလုံး "နဲ့တူ" မကြာသေးမီကဂယ်ရီ Wilson ကနှောင့်ယှက်များအတွက်7ရက်ကြာပိတ်ပင်မှုပြီးစီးခဲ့သောတစ်ဦးထင်ရှားတဲ့တွစ်တာ trolls ၏ tweet ။ ကိန်းဂဏန်းသွားပါ။
RealYBOP ရဲ့ပစ်မှတ်ထားရေဖျက် cyberstalking ထိပ်ပေါ်ချယ်ရီ: As ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထား, RealYBOP ရဲ့ reddit အကောင့်, sciencearousal များသောအားဖြင့် "Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်" နေရာတိုင်းမှာဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့အမည်သို့မဟုတ်ပို့စ်တင်, reddit porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ trolled နှင့် spammed ထင်ရှား။ , သူမ၏မကြာသေးမီ reddit ရေးသားချက်များအတွက်, sciencearousal တစ်ဦး nofap spammed မကြာခဏ RealYBOP နှင့် Nikki (Kuznia Nikki နှင့်အတူ pals ဖြစ်ပါသည်) က Tweet လုပ်ခဲ့အတူတူရော့ Kuznia ဆောင်းပါးနှင့်အတူ subreddit ။ Nofap သူမ၏ post ကိုဖျက်ပစ်:
RealYBOP / sciencearousal မှတ်ချက် ဘယ်မှာသူမရဲ့ fav မှဆက်သွယ် - ဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့ TEDx Talk ကိုမှ link တစ်ခု conatins ပေးသောညစ်ညမ်း, (Sciencearousal မှတ်ချက်ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်) အကြောင်းကိုဒါဝိဒ်သည် Duke ရဲ့ဆောင်းပါး:
Ley Wilson ကသိက္ခာချဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်ဘာမှများအတွက်အင်တာနက် Scouring သူဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့ TEDx ဟောပြောချက်ကို link တစ်ခုင်တစ်ဦးထင်ရှားတဲ့ (နှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်) ဒါဝိဒျ Duke blog post: အပေါ်သို့ pounced ။ အားလုံးစင်း၏ရှေးရှေးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆက်စပ် (နှင့်အကြံပြုထားသည်) ရှိသည်ဟုဒါ Wilson ကရဲ့ TEDx ဟောပြောပွဲ ", Wilson ကရဲ့ဆွေးနွေးချက်တချို့ 12 သန်းအမြင်များရှိပါတယ်မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု။ "
ဘယ်လိုဒီအဖြစ်ဂယ်ရီ Wilson က ဆက်စပ်. အပါဘူး "အဖြူ supremacist?" ဒါဟာသင်တန်း၏, မပေးပါဘူး။ ဒါဟာရယ်စရာအခိုင်အမာဟစ်တလာသည်သူ၏ခွေးကိုချစ်သောကြောင့်အားလုံးခွေးချစ်သူများနာဇီရဲ့များမှာအကြံပြုခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဝိဒ်သည် Duke သူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ "ဒီ Matrix" ၏ထုတ်လုပ်သူ Neo-နာဇီဖြစ်ကြောင်းဟုဆိုကာနှင့်ညီမျှပါတယ်။ ကြည့်ရှုပါ: ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - David Ley & Prause သည်နာဇီကိုထောက်ခံအားပေးသူများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဟုပြောဆိုခြင်းအားဖြင့် YBOP / Gary Wilson & Nofap / Alexander Rhodes ကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားနေသည်။
မှတ်ချက်: Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုဆန့်ကျင်ဖို့မဆိုအပေါင်းတို့နှင့်ဥပဒေရေးရာပြန်လည်ကုလိုက်လိမ့်မည်။
၂၁-၂၇၊ သြဂုတ် ၂၀၁၁ - Gary Wilson ကို Realyourbrainonporn (Daniel Burgess) အသရေဖျက်မှု / နှောင့်ယှက်ခြင်း။ Internet Wayback Archive တွင်ညစ်ညမ်းသော URL URL အတုများ
context: realyourbrainonporn.com, ဒံယေလ Burgess နှင့်နီကိုးလ် Prause
ငါကြား၏တစ်ခါမျှ 2018 ၏ဖေဖော်ဝါရီလမတိုင်မီက ဒံယလေသ Burgess LMFT။ ရုတ်တရက်ဘယ်နေရာမှာထဲက Burgess အကြှနျုပျနှငျ့အ YBOP တိုက်ခိုက်ရန်မျိုးစုံလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများအသုံးပြုခဲ့သည်။ Burgess ရဲ့ပစ်မှတ်ထားနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုအများအပြားအောက်မှာတွစ်တာ (အပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် @YourBrainOnPorn tweets) နှင့် Facebook တွင် (ထို YBOP Facebook က စာမျက်နှာ၏တဦးတည်း Burgess ရဲ့ Facebook ကိုစာမကျြနှာ, ပြီးနောက် အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသ Facebook စာမျက်နှာ).
မိမိအဖေဖော်ဝါရီလ / မတ်လ, 2018 လူမှုမီဒီယာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်း ဒံယလေသ Burgess ကျွန်မကိုရှုတ်ချပြီးနှောင့်ယှက်ခဲ့တယ် - သူမနှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်ပြောခဲ့တဲ့နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့အလွဲသုံးစားမှုအယူအဆတွေကိုပြန်ပြီးထိမ်ချန်ထားခဲ့တယ်။ Burgess ၏မှတ်ချက်များနှင့်တွစ်တာများသည် Prause နှင့်တူညီသည် တီထွင်ပြစ်၏နွှယ်နေတယ်လို့, Burgess နှင့် Prause ပူးပေါင်းနှင့်အနီးကပ်ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ကြောင်းသံသယထွက်ခွာ။ (ပုဂ္ဂလိကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ကောလာဟလတွေရှိတယ်။ ) သူ့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ဥပမာအနေဖြင့် Burgess ရဲ့ YBOP ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုကန ဦး မှတ်ချက်ပေးလိမ့်မယ်။ ၎င်းတွင်နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်၏အခြေအမြစ်မရှိသော ၂၀၁၅ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ကျွန်ုပ်ထံစာမထွက်တော့ခြင်း (ဘာဂါကဤစာကိုမည်သို့ရရှိခဲ့သနည်း) ပါ ၀ င်သည်။
ကျနော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း Prause ရဲ့အမှာစကားပြောကြားသည် တက်လက်သံအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ရပ်တန့်အက္ခရာ။ အဘယ်အရာကိုမျှစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ Prause သည်ခြိမ်းခြောက်မှုနည်းဗျူဟာတစ်ခုအနေဖြင့်အတုအယောင်ဖြစ်သော C&D အက္ခရာများကို (သူမရှေ့နေမဟုတ်ဘဲသူရေးသားခဲ့သည်) ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - အဆက်အသွယ်အတုမရှိသောတောင်းဆိုမှုများ၊ အတုအယောင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတောင်းဆိုမှုများနှင့်လူများကိုနှုတ်ဆိတ်နေခြင်းကိုချီးမွမ်းပါ (Linda Hatch၊ Rob Weiss, Gabe Deem, Gary Wilson, Marnia Robinson, Alex Rhodes, etc)။ C & D များသည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောကြောင့်သက်သေအထောက်အထားများကိုသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၊
Burgess အဆိုပါ YBOP Facebook စာမျက်နှာနှင့် Twitter ပေါ်မှာငါ့ကိုရှုတ်ချမကြာခင်မှာပဲပြီးနောက်သူက "အပေါ်သူ၏မြင်ကွင်းများကိုသတ်မှတ်အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသ။ "ကုသ Stacy ညှနျ့နှင့်သစ်တောဘင်နီဒစ်အားဖြင့် Burgess မှတဆယ်ရှစ်ပြန်စာများ၏ဖြစ်နေဆဲသောသူအပေါင်းတို့သည်များမှာ Burgess ရဲ့အသရေဖျက် tirade။ Burgess ကသူ့အသရေဖျက်မှုပြသသောကြောင့် 6,000 ကုသနှင့် YBOP Facebook ကပရိသတ်ကိုလိုင်စင်ရမှီ, ငါသညျသူ၏အန္တရာယ်ရှိတဲ့မှတ်ချက် (နှင့်ညစ်ညမ်းသုတေသန၏သဘောအရဆိုလျှင်အကြောင်းကိုသည်မိမိကလက်ခံတောင်းဆိုမှုများ) debunk ကလိုအပ်သောခံစားခဲ့ရ: မကိုက်ညီသည့်တောင်းဆိုချက်များနဲ့ Daniel Burgess (မတ်လ, 2018) ကကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုက်ခိုက်မှုများ addressing ။
ဒန်နီယယ်ဘာဂေ့စ်ကိုနီကိုးလ်ပရာယပ်စ်၏မှားယွင်းသောကောင်လေးဖြစ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်ဤဇာတ်လမ်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်သူတို့သည်ထပ်မံပူးပေါင်းလာကြသည်မှာ (၁) ပါ ၀ င်ခြင်း ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု of YourBrainOnPorn.com အတွက် realyourbrainonporn.comနှင့်, (2) ကို operating လူမှုမီဒီယာအကောင့် realyourbrainonporn.com အတွက် (အထူးသဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သော Twitter အကောင့် -) @BrainOnPorn) ။ တကယ်တော့, ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်း, 2019 အတွက် ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သော URL www.realyourbrainonporn.com ကိုပိုင်ဆိုင်သူအဖြစ် Daniel Burgess ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်
လူသိရှင်ကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများနှင့်ပြစ်မှုလူတွေကိုစွပ်စွဲအရေးယူမှုဖြစ်ပါက။ တကယ်တော့အထက်ပါသရေဖျက်မှုထုတ်ပြန်ချက်များ "ယူဆနေကြသည်se နှုန်းအသရေဖျက်မှု"- ငါ (ငါ့အစာအုပ်အနေဖြင့်ရရှိသောမေတ္တာကိုသွားနဲ့ကျွန်မ YBOP ထံမှငွေမရှိသောစေ) recover နိုင်ရန်အတွက်မည်သည့်စီးပွားဖြစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမပြလိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ 21, 2019: @RonSwansonTime (ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည် Burgess alias ကို), နီကိုးလ် Prause, NerdyKinkyCommieနှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley မှော်အတုအယောင်ညစ်ညမ်းသော URL များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် အင်တာနက်ကို WayBack Machine
သြဂုတ်လ 21, 2019 တစ်ဦးတွင် ဖြစ်နိုင်ဖွယ် Burgess alias ကို (@RonSwansonTime - ပိုပြီး အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော "RonSwanson") (လိမ်လည်လှည် porn URLs များကိုတစ်ဦးစခရင်ပုံ Tweet လုပ်ခဲ့တည်ရှိဘယ်တော့မှကြောင်းစာမျက်နှာများ) ။ ဒါဟာအောက်မှာညျထငျရှား NerdyKinkyCommie tweet ငါ့ကိုအကြောင်းကို ranting ။ (Nerdy တဲ့ professional trolls ဖြစ်ပါတယ် Prause-ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ အဘယ်သူသည်ငါ့ကိုနှောင့်ယှက်များအတွက်7ရက်ကြာတွစ်တာရပ်ဆိုင်းမှုကိုလက်ခံရရှိ) ။ :
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း trolls များနှင့် stalkers သူတို့၏နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် realyourbrainonporn ဝက်ဘ်ဆိုက် admin မှဤအီးမေးလ်ကို Gary Wilson သို့ပေးပို့ခဲ့သည်။ (Burgess သည် URL ကိုမှတ်ပုံတင်သည်နှင့်အမျှသူသည်အောက်ပါတို့ကိုသူပို့ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆရမည်။ )
RealYBOP သရေဖျက်မှုအီးမေးလ်များပို့ခြင်းနှင့် obsessive အတုညစ်ညမ်း URLs များကို tweeting ခဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ်ဦးအတုတွစ်တာအကောင့်အတူတူ drivel ပို့စ်တင်ထငျရှား https://twitter.com/CorrectingWils1။ RealYBOP အလားတူ tweets များစွာအတွက် tag ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ် CorrectingWilson အကောင့် (GAIL ထမင်းစားခန်း, The New မူးယစ်ဆေး, ယောဟန် Foubert, SASH123 နှင့် YourBrainOnPorn Fight) ကိုအတိအကျတူညီတွစ်တာအကောင့် tagged:
အမှားကြီး။ အမည်မဖော်လိုသူတစ် ဦး က realyourbrainonporn ၏ URL ထဲသို့ URL အတုနှစ်ခုထည့်သွင်းထားကြောင်းမဟာမိတ်တစ် ဦး ကပြောပြပါ ပိုင်ဆိုင် Wayback မော်ကွန်းတိုက်:
ယင်းမော်ကွန်းတင်ပြီးအတု realyourbrainonporn စာမျက်နှာ screenshot: https://web.archive.org/web/*/http://www.realyourbrainonporn.com/we-are-terrible-people
လူတို့အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများ၊ တကယ်တော့ အကယ်၍ ခုံရုံးသည် RealYBOP ၏လုပ်ရပ်များဟုယူဆလျှင်“အသရေဖျက်မှု se နှုန်းပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်စီးပွားဖြစ်ပျက်စီးမှုများကိုဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ RealYBOP ၏ (Burgess ၏) လုပ်ရပ်များအတွက်ပြန်လည်ကုစားရန်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖွင့်ထားသောကုစားနည်းများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါသည်။
အားလုံးအထက်ပါ mirror ကိုမုသာစကားကိုနီကိုးလ် Prause မရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ် posted ထားပါတယ်။ (ဤစာမျက်နှာ ၂ ခုသည် Prause ၏မုသာစကားများ၊ စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2။ ) အားလုံးသည် Prause စာမျက်နှာများတွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့်အသရေဖျက်မှုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုစီအတွက်အချိတ်အဆက်များကိုတိုတောင်းသောတုန့်ပြန်မှုပေးပါလိမ့်မည်။
မဟုတ်ပါ။ အောက်ပါ“ Ron Swanson” အပိုင်းတွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း၊ 21 ဇွန် ၂၁ တွင် RealYBOP သည် California တောင်ပိုင်းကိုပါ ၀ င်ခဲ့သည် ACLU Prause နဲ့ငါ့အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုအငြင်းပွားမှုအတွက် (နီကိုးလ် Prause LA ကနေထိုင်) ။ တစ်ဦးက SoCal ACLU ရှေ့နေ RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများအကြှနျုပျနှငျ့အ YBOP ကဲ့ရဲ့ရှုရန်ညာဘက်ခဲ့အားကောင်းမောင်းသန်, အကြှနျုပျ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရှေ့နေများတစ်ထူးထူးဆန်းဆန်းစာတစ်စောင်ကိုစေလွှတ်။ , အဆိုပါ SoCal ACLU ရှေ့နေသာကနေတစ်ခုတည်းဝါကျတစ်ခုအပိုင်းတုံ့ပြန်ခဲ့သည် ငါ၏အ 8-စာမျက်နှာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ရပ်တန့်အက္ခရာ RealYBOP နှင့် Nicole Prause သို့ (ပါ ၀ င်သည့်ဝါကျကိုအခြေအနေမှဖယ်ထုတ်ပြီး SoCal ACLU မှတလွဲဖော်ပြခဲ့သည်) သို့။
ACLU စာသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အငြင်းပွားမှုနှင့်ဘာမှမသက်ဆိုင်ပါ။ RealYBOP သည် SoCal ACLU အားတွစ်တာများမှတလွဲဖော်ပြရန် RealYBOP အတွက်မဆီလျှော်သောမသင့်လျော်သောစာတစ်စောင်ထုတ်လုပ်ရန်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်ကိုနားလည်ရန်မလွယ်ကူပါ။ (မှတ်ချက် - တရား ၀ င်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတောင်းခံရန်အတွက် National ACLU ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ) အောက်ခြေမှတ်ချက် - Daniel Burgess နှင့် Nicole Prause တို့ကိုတရားစွဲဆိုခြင်းသည်အောင်မြင်စွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်၊ ACLU ၏စာနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိ။
သြဂုတ်လ 26, 2019: @BrainOnPorn RealYBOP မှကျွမ်းကျင်သူများအားအကြိမ် ၁၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိဖော်ပြခဲ့သည်ဟုမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်သူ၏ ၁၀၀+ အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာဆန္ဒပြမှုကိုတရားမျှတစေသည် YBOP အပေါ်
နောက်ဆက်တွဲ - အီးvidence ကြောင်း @RonSwansonTime တကယ်ပါ ဒံယလေသ Burgess, realyourbrainonporn ၏ပိုင်ရှင်
Burgess နှင့်သူ၏ဇနီးသည် CrossFit တွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်မှာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ။ သူကတောင်ဖန်တီးခဲ့တယ် ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို chronicling Facebook စာမျက်နှာ။ (မှတ်ချက်: Burgess ငါ့ကို trolling, ငါ့ကို defaming ဖြစ်ပါတယ်သာမကရှိသောကြောင့်, ငါ့ကိုအက္ခရာများခြိမ်းခြောက်ဗြောင်ကျကျကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုမြားတှငျပါဝငျခွငျး, ယခုတရားစွဲဆိုခြင်းအားပေးပို့ခြင်း, ငါတို့ကသူ့နဲ့သူ့နာမည်အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေကြပြီ။ )
ဇူလိုင်လအရ 2019 သည်လူသိများသော RealYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သုံးခုသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သောဒေးဗစ်လိုင်၊ Justin Lehmiller နှင့် Chris Donaghue တို့နှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေကြသည်။3အားလုံးသည်အပေါ်တွင်ရှိသည် အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ ထောငျခါ၏ လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ။ အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးဗြောင်ကျကျဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများတွင်, ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့် SHA များမှာ porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်! မြင် "Stripchat သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန် porn-ဗဟိုပြုဦးနှောက်လေဖြတ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ aligns။ "
အဆိုပါ xHamster / SHA ကညာခရီးအတွက် Ley xHamster ဖောက်သည်ကိုပြောပြမယ့် အဘယ်အရာကို "ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအမှန်တကယ် porn, camming နှင့်လိင်အကြောင်းကိုပြောပါ":
Ley xHamster ဖောက်သည်ကြောင်းပြောပြလိမ့်မယ် (65 ခန့်) အစဉ်အဆက်ယောက်ျားအပေါ်ထုတ်ဝေတိုင်းလေ့လာမှု ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စပ်လျဉ်းကျေနပ်မှုမှလင့်များပိုပြီး porn အသုံးပြုမှု? Ley သမျှသောသူတို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ် 45 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ porn သုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲမူးယစ်ဆေးစွဲတွင်တွေ့မြင်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံတင်ပြ? သူက porn အသုံးပြုသူ% 50 သူ၏ပရိသတ်ကိုအသိပေးပါလိမ့်မယ် သူတို့ယခင်ကစိတ်မဝင်စားသို့မဟုတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တွေ့ရှိခဲ့ပစ္စည်းမှမြင့်တက်အစီရင်ခံစာ? တစ်နည်းနည်းနဲ့ငါကသံသယ။
သူတို့ရဲ့မြှင့်တင်ရေးတွစ်တာမှာဆိုရင် SHA ဦး နှောက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကအသုံးပြုသူရဲ့“ porn စိုးရိမ်စိတ်” နဲ့“ ရှက်စရာ” တွေကိုသက်သာအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတယ် (Ley နဲ့အခြား SHA“ ကျွမ်းကျင်သူတွေ” ဟာ ဦး နှောက်ကိုကျွမ်းကျင်သူတွေအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာကွာဝေးနေပြီ) ။
David ၏နောက်ထပ်ဟောပြောချက် - Ey, No-NutNovember ကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိအသုံးချခြင်း (အမှန်တကယ်ပစ်မှတ်မှာ Nofap ဖြစ်သည်) နှင့် RealYBOP မှရာထူးတိုးသည်။
RealYBOP ကို ​​Stripchat မှမည်ကဲ့သို့မှတ်သားသည်ကိုကြည့်ပါ။ ဤနေရာတွင်သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါ၊
ဘက်လိုက်? ဒါဝိဒ်သည် Ley, Justin Lehmiller နဲ့ Chris Donaghue ၏ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဆေးရွက်ကြီးဆရာဝန်များ, နှင့်လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့၏ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး ဆေးရွက်ကြီး Institute မှ။
ထိုအခါ Nikky Prause, RealYBOP နောက်ကွယ်မှပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ရှိသည်။ သူမသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကြာရှည်စွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုရှိသည်။ ရေခဲစိုင်၏အစွန်အဖျားတွင်ကြည့်ပါ -
ဤတွင် 2016 တက်ရောက်ခြင်း Prause ဖြစ်သည် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား။ အဆိုအရ ဝီကီပီးဒီးယား "အဆိုပါ XRCO ဆုပေးပွဲအမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လူများ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေး ထိုသို့စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved စက်မှုလုပ်ငန်းဆုကိုပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။ "
၃၂ ကြိမ်မြောက် XRCO ဆုပေးပွဲပြပွဲသည်ပြသနာတစ်ခုရှိပါက၊ ၎င်းသည်မည်သို့ပါတီပွဲကျင်းပမည်ကိုမမေ့သေးပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်း၏အကြီးမားဆုံးသောမီးချောင်းများ၏အဓိကကန့်သတ်ချက်သည် OHM ၏နိုက်ကလပ်အား Hollywood & Highland ရှုပ်ထွေးသောနေရာတွင်ထုပ်ပိုးပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်း၏ပျော်ရွှင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည့်အတွက်စွမ်းရည်နိမ့်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမတိုင်မီကအခမဲ့လှသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ခေတ်ကာလအတွက်စစ်မှန်သောအခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ဓနသဟာယသည်သက်ရှိသတ္တ ၀ ါများအလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေကြောင်းသတိရစေသည်
Prause သည် 2019 ရှိ AVN သို့တက်ရောက်ခဲ့ပါသလား။ PornHarms Trolling, Prause အခမဲ့တီရှပ်များကမ်းလှမ်း သူနှင့်အတူ trolls ဆန္ဒရှိအခြားသူများ။ အဆိုပါတီရှပ်များ၏တစ်အရသာမရှိသောပျက်လုံးများဖြစ်ကြသည် FTND porn ချစ်ခြင်းမေတ္တာတီရှပ်များဦးသေဆုံး။ အဆိုပါ3ဆုရရှိသူ porn ကြယ်ပွများမှာ!
Avalon က Prause ကို AVN မှာအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ရှိဖို့ပြောထားသည်။ ဤနေရာတွင်ရှေးရှေးအဘယ်သူမျှမဘက်လိုက်မှု။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၊ စက်တင်ဘာ - NoFap ပါ ၀ င်သည့် CNN အထူးအစီအစဉ်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် RealYBOP Twitter (Prause မှဖွင့်လှစ်ထားသည့်) Nofap မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်စ် (tweets ၃၀ ကျော်) ကိုအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်း
နှစ်ပေါင်းများစွာ RealYBOP အသင်းဝင်များနီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်ဒေးဗစ်လီတို့သည်ညစ်ညမ်းမှု၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်များကိုသတိပေးသည့်ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များကိုသတင်းပို့သည့်သုတေသနပြုထားသောလူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများကို ပူးပေါင်း၍ ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ RealYBOP twitter သည်လည်းအလားတူလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Prause, Ley နှင့် RealYBOP တို့၏အကြိုက်ဆုံးပန်းတိုင်မှာ Nofap မှ Alex Rhodes ဖြစ်သည်။ Nicole Prause & David Ley ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်း NoFap မှ Alexander Rhodes အားအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းတို့၏သမိုင်း။ မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် - ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ဇူလိုင်လမှာ Alexander Rhodes က Nicole R Prause & Liberos LLC ကို Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်။
NoFap နှင့် Rhodes featuring တစ်ဦးက CNN အစီအစဉ်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အ RealYBOP က CNN ချည်နှင့်တခြားနေရာက၎င်း၏မုသာစကားကို tweeting, လျာထားသောနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုအတွက်ပါဝငျ:
Lisa Ling ၏ထုတ်လွှင့်မှုကိုတန်ပြန်ရန်အတွက် Justin Lehmiller ၏ဆောင်းပါးကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် Lehmiller ၏ပြောဆိုချက်များကိုထောက်ခံရန်လေ့လာမှုများမဖော်ပြထားပါ။ ကြောင်း Lehmiller သတိပြုပါရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ Playboy အားဖြင့်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်, အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် RealYBOP ၏ (အုပ်စု YBOP ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ချိုးဖောက်), နှင့် SHA ၏ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန် xHamster နှင့်အတူပူးပေါင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့.
အဲလက်စ် Rhodes မုသာမသုံးခဲ့ပါဘူး။ RealYBOP လဲလျောင်းမည်သူမဆို၏ဥပမာတစ်ခုကိုးကားရန်ပျက်ကွက်။ သုတေသန vs. RealYBOP ဝါဒဖြန့်? ထွက်ခွာသည် အဓိက YBOP သုတေသနစာမျက်နှာ, porn အသုံးပြုမှုကိုများပြားလှသောဆိုးကျိုးများနှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်။ 1,000 လေ့လာမှုများနှင့်ပတ်သက်။ လင့်များပါရှိသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်မှားယွင်းမှုများ YBOP သည် RealYBOP ၏တောင်းဆိုမှုများကိုဤနေရာတွင်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်သူများ၏“ သုတေသနစာမျက်နှာ” ကိုဆန်းစစ်ထားပြီးယင်း၏ချယ်ရီရွေးကောက်ယူမှုအပြင်လေ့လာမှုများ၊ ဘက်လိုက်မှု၊
RealYBOP twitter အဲလက်စ် Rhodes ၎င်း၏ cyberstalking ဆက်လက်:
Lisa လိဂ်ထုတ်လွှင့်သည့်နေ့တွင် RealYBOP ၏ဆိုက်ဘာစတင်သည့်အစီအစဉ်သည်ပရိုဂရမ်နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သည့်မိုက်မဲသောဆလိုက်များနှင့် Nofap ဖော်ပြသည့်နေရာတိုင်းတွင်ချည်မျှင်များဝင်ရောက်လာသည်။
အဘယ်အရာကိုအများပြည်သူမသိစေခြင်းငှါမ ICD-11 ကြောင့်မယားရဲ့ DSM-5 အစဉ်အဆက်တစ်ခုစွဲကိုဖော်ပြရန်ဖို့ "စွဲ" ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုသည် - ကစွဲ, ဘိန်းဖြူစွဲ, စီးကရက်စွဲလောင်းကစားခြင်းကိုခံရ, ဒါမှမဟုတ်သင်ကအမည်ရှိမရှိ။ နှစ်ဦးစလုံးရောဂါရှာဖွေလက်စွဲအစား "စွဲ" (ဆိုလိုသည်မှာ "လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ", "နီကိုတင်းကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ," ဒါအပေါ်) ၏စကားလုံးက "ရောဂါ" ကိုအသုံးပြုပါ။ ထို့ကြောင့် "လိင် စှဲမွဲမှု"နှင့်" porn စွဲလမ်း " အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပယ်ချထားသည်ဘယ်တော့မှနိုင် သူတို့တရားဝင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်မှာဘယ်တော့မှခဲ့ကြသည် အဓိကရောဂါရှာဖွေလက်စွဲ၌တည်၏။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် "porn စွဲလမ်းမှု" ဆိုတဲ့ရောဂါဘယ်တော့မှမရှိတော့ပါဘူး။
သို့သျောလညျးကို "porn စွဲ" သို့မဟုတ် "methamphetamine စွဲ" နှင့်ကိုက်ညီ၏လက္ခဏာနှင့်လက္ခဏာများနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ အဆိုပါ ICD-11 ရဲ့သုံးပြီးရောဂါရနိုင် ပြ္ဌာန်းချက်များ။ Prause ၏တောင်းဆိုမှုများကိုအပြီးသတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်၊ "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က.
အဖြစ်မှန်: 250 ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအန္တရာယ်များစွာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်.
porn သည် ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ
အဖြစ်မှန် - ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည် 45 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
အဖြစ်မှန်။ ။ 15-29 သည်သြစတြေးလျနိုင်ငံသားများ၏အသက်အရွယ်အပေါ်လေ့လာမှုအရယောက်ျားများ၏ 100% (အမျိုးသမီးများ၏ 82%) သည် porn ကိုကြည့်ရှုခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ (2017) နဲ့ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ၏ Young ကသြစတြေးလျ '' အသုံးပြုမှု
Lisa ကိုလင်း Trolling ။ “ မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်” ကိုဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်သည် (ဘယ်သောအခါမျှမ):
Ouch: porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")
Trolls Noah Church (RealYBOP သည်အကောင့်များကိုပိတ်ဆို့သည်၊ ထို့နောက်သူတို့မသိဘဲသူတို့၏ချည်မျှင်ဖြင့်တွစ်တာ)
RealYBOP သည် Prause နှင့် David Ley တို့၏ Psychology Today ဘလော့ဂ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် (လေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Prause မှသံသယရှိသောအချက်အလက်သာ)
RealYBOP BS: Nofap သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ Nofap ကုသမှုမပေးပါ
နောက်တဖန်မည်သူမျှမည်သူမဆိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ RealYBOP ပစ္စည်းပစ္စယအောင်:
Justin Lehmiller ၏ဆောင်းပါးသည် Lisa Ling ၏ထုတ်လွှင့်မှုကိုတန်ပြန်ရန်နှင့်၎င်း၏အခိုင်အမာအထောက်အကူပြုစာတမ်းများကိုမဖော်ပြခဲ့ပါ။ ကြောင်း Lehmiller သတိပြုပါရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည် Playboy အားဖြင့်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်, အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် RealYBOP ၏ (အုပ်စု YBOP ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ချိုးဖောက်), နှင့် SHA ၏ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန် xHamster နှင့်အတူပူးပေါင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့.
RealYBOP သည် Gabe Deem ကိုထိန်းချုပ်သည်။
Nicole Prause နှင့်သူမ၏ PornHelps အတုအကောင့်အတုတွင် Deem ကိုနှောင့်ယှက်ခဲ့သည်။
မတ်လ၊ 2016 - ချီးမွမ်းခြင်း (မှားယွင်းစွာ) ဖော်ပြသည်။ အချိန် ဂါယူဆပါသည်တစ်ခုပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်အတွက်သူမ၏လေ့လာမှု (အယ်ဒီတာမှစာတစ်စောင်) ၏တရားဝင်ဝေဖန်မှုရေးသားဖို့ဆရာဝန်တစ်ဦးယောငျဆောငျတု (နှင့်စာဂါရဲ့ကွန်ပျူတာကိုခြေရာခံမိ) ထိုမဂ္ဂဇင်း
Lisa Ling ၏အခြားသူအားလှည့်စားနေသည်
RealYBOP သည်ပညာရှင်များ၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်၍ တည်ရှိပြီးအများစုမှာတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခများဖြစ်သည်။ https://www.realyourbrainonporn.com/experts
အဖြစ်မှန် - RealNBOP အားသူတို့၏ရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသော 19“ ကျွမ်းကျင်သူများ” မှ6သာတက္ကသိုလ်များတွင်ရှိသည်။
ဒီတွစ်တာမှာ RealYBOP က Alex Rhodes ကို Pennsylvania စိတ်ပညာဘုတ်အဖွဲ့ကိုသတင်းပို့ဖို့အားပေးမှုဖြစ်ပုံရတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် RealYBOP သည် Rhodes တွင်မှားယွင်းသောအမှုများနှင့်အစီရင်ခံစာတင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရခြင်းမှာအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ (Prause ၏မှားယွင်းသောနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသတင်းပေးပို့ချက်များသည်ဤစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ရှိသည် - စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2).
CCN ကို Trolling
ငါတို့ debunk လုပ်ထားသောစာမျက်နှာသို့ RealYBOP လင့်များ: porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com").
ယခု RealYBOP သည် Gary Wilson နောက်သို့လိုက်သွားသည်။
WIPO ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သူ့လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်နာသော်လည်း၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များဖြစ်သည့်တိုင် Wilson သည်လိုအပ်လျှင်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးများသို့ဆက်သွားလိမ့်မည်။
RealYBOP သည် porn ကြယ်ပွင့်ကို CNN အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းသည်။ (ပုံပေါ်နေသည်)
မှတ်ချက် - Prause / RealYBOP သည်အခြားသူများ (wilson, Rhodes, etc) သည်သူမကိုနောက်ယောင်ခံနေသည်ဟုမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုသည်။ တကယ်လို့ (ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်) ဘာကြောင့် Prause / RealYBOP ဟာ Wilson နဲ့ Rhodes twitter ကိုဆက်ပြီးဘာကြောင့်ဆက်လက်တွယ်တာနေတာလဲ။ နှစ်ခုလုံးကို tag လုပ်တာ၊ နှစ်ခုလုံးနာမည်ပေးခြင်း၊ အဖြေ - Prause / RealYBOP သည်အနှောင့်အယှက်ကင်းမဲ့နေခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်တစ်နေ့တွင် RealYBOP သည် Lisa Ling ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။
WHO က ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းပယ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ မ APA ကိုပြု၏။ ကလေးများသည် ပို၍ စိတ်သောကရောက်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းမရှိပါ။
ဆယ်ကျော်သက်များအကြောင်းတစ် ဦး တည်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောလေ့လာမှုနှင့်အတူအဖြစ်မှန်တိတိကျ tweet:
နောက်တဖန် Nofap ကိုရှုတ်ချခြင်း (စက္ကူတလွဲဖော်ပြသည်):
Ley, Prause နှင့် RealYBOP တို့သည် NZ grad ကျောင်းသား Kris Taylor ၏ထင်မြင်ချက်စာတမ်းများကိုစွဲလမ်းကြသည်။ ဘက်လိုက်မှုမရှိသောတေလာသည် - အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမသိပါ။ သူကလူမှုဗေဒပညာရှင်ပါ။ YBOP သည် 2017 ဆောင်းပါးကို Gary Wilson နှင့်အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဝေဖန်ခဲ့သည် (တေလာသည်သူ၏ဆောင်းပါး၌လိမ်လည်ခြင်းကိုသာအသုံးပြုလေ့ရှိသည်) ကိုသူကဝေဖန်ခဲ့သည်။ (2017) "Porn နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ခက်အမှန်တရား" Kris တေလာရဲ့ Debunking.
ဤစာတမ်းသည် Prause နှင့် Ley တို့၏အကြိုက်ဖြစ်သည် နှစ် ဦး စလုံးထည့်ခြင်း Prause ၏ဝီကီပီးဒီးယား aliases ဝီကီပီးဒီးယားစာမကျြနှာသို့။ Prause obsessive ကိုးကား (နှင့်ဂေါ်) Nofap အကြောင်းတေလာ၏စက္ကူ။ Reality: grad ကျောင်းသား Kris တေလာ၏စာတမ်းသည် reddit / nofap မှ 15 မှတ်ချက်များကိုသာအကဲဖြတ်။ သန်းနှင့်ချီသောအခြားမှတ်ချက်များကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ တေလာသည်“ masculinity” ဟူသောစကားလုံးပါသောကြောင့် 15 မှတ်ချက်များကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Prause / RealYBOP ၏လိမ်လည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တေလာသည် Nofap နှင့်၎င်း၏အသုံးပြုသူများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမဟုတ်ပါ။ တေလာ၏စာတမ်းမှ
ဒေတာစုဆောင်းမှုကိုဤချဉ်းကပ်မှုအရတင်ပြထားသည့်အချက်အလက်များသည် NoFap တစ်ခုလုံး၏ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ်ဖတ်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပုလ်နှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၌အထူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမည်သို့ဖော်ပြသည်ကိုဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့အလေးပေးလိုပါသည်။ (Edley, 2001; Edley) နှင့် Wetherell, 1997) ။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူ၏ပို့စ်များကို (ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစားအစာများစသည်ဖြင့်ဆွေးနွေးခြင်းမှတဆင့်) ပုဂိ်္ဂုလ်များကိုရည်ညွှန်းချက်အဖြစ်နားလည်ထားသည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုသည်အသုံးပြုသူများသည်ပုလ်ရာထူးများကိုတက်ကြွစွာဖွဲ့စည်းရန်နည်းလမ်းများကိုတင်ပြသည်။ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေရေးဝေါဟာရသည်“ ပုဂ္ဂုလ်များ” ဟူသောစကားလုံးသည်ပုဂ္ဂိလ်လိပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအထူးသက်ဆိုင်သည့် 'မူရင်းစာမူများ' ၏စာမျက်နှာများစွာကိုပြန်ဆိုခဲ့သည်။
မြင် ဒီနောက်ကျောနှင့်ထွက် Prause နှင့် Bart အကြား စက္ကူ၏တေလာဟာသကိုရည်မှတ်။
ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ တွင်အဲလက်စ်ရော့စ်သည်တင်သွင်းခဲ့သည် Prause ဆန့်ကျင်ပြင်ဆင်ချက်တိုင်ကြားချက် RealYBOP ရဲ့ twitter အကောင့်ကိုလည်းအမည်ပေးထားတယ်။@BrainOnPorn) အသရေဖျက်မှုအတွက်ပါဝငျအဖြစ်။
ဇာတ်လမ်းနှင့်တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ - NoFap တည်ထောင်သူ Alexander Rhodes Nicole Prause / Liberos အားတရားစွဲဆိုမှု။ နောက်ဆုံးတွင် RealYBOP ၏လိမ်လည်မှု၊ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ The @BrainOnPorn twitter ကိုဖက်ဒရယ်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်။
ပြကွက် ၃ - Nicole Prause ၏အဲလက်စ်ရော့ဒ်ကိုအသရေဖျက်မှုပြထားသောပုံများ (၆၁ မျက်နှာ)
နှင့် အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်၏ပြပွဲများ (မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၀) - စာမျက်နှာ ၅၇ မျက်နှာ။
တရားဝင်တာဝန်ရှိသူ - Prause (သို့) Daniel Burgess သာလျှင် (နောက်ခံ URL ကိုမှတ်ပုံတင်ထားသူ) သာဖြစ်စေ၊ RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက"? Rhodes တိုင်ကြားချက်မှသက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ:
အဖြစ်မှန်တွင် @BrainOnPorn သည် Rhodes နှင့် Nofap ကိုပစ်မှတ်ထားသည့်တွစ်တာများစွာကိုတင်ခဲ့သည်။ Nicole Prause၊ David Ley & @ BrainOnPorn ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်း NoFap ၏ Alexander Rhodes
ကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေများကတိုင်ကြားချက်ကိုတင်သွင်းခဲ့သည် ကမ္ဘာ့ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်အဖွဲ့အစည်း (WIPO) ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - ချိုးဖောက်က်ဘ်ဆိုက်ရှိခြင်းမှဖြစ်နိုင်သမျှလမ်းကြောင်းအဖြစ် www.realyourbrainonporn.com တတ်နိုင်သမျှလျင်မြန်စွာနှင့်စီးပွားရေးအရဝက်ဘ်ကနေဖယ်ရှားခဲ့သည်။ WIPO မှကန ဦး တိုင်ကြားချက်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်၊ ဒံယလေသ Burgess မှတ်တမ်းတွင်ဆိုက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့် Burgess အားပြင်ဆင်ချက်ကိုထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့် WIPO တိုင်ကြားချက် - ဂယ်ရီ Wilson နှင့်ဘာ့ဂ်နှင့် Prause (RealYourBrainOnPorn) ။
တရားမ ၀ င်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကြောင့် USPTO ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (YBOP, yourbrainonporn, yourbrainonporn.com) ကိုကျွန်ုပ်အပြီးသတ်သည်အထိကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Burgess နှင့်ကုမ္ပဏီအားအောင်မြင်စွာရပ်တန့်ရန်ရှေ့သို့မသွားမီ။
Prause & Burgess ရဲ့ရွှင်လန်းမှုကုန်ဆုံးသွားပါပြီ
ဇန်နဝါရီလ, 2021 ခုနှစ်တွင် www.RealYourBrainOnPorn.com YBOP အားပိုင်ရှင်ဟောင်း (များ) များအပြီး URL ကို YBOP သို့ပေးခဲ့သည်၊ နီကိုးလ် R.Prause နှင့် ပူးပေါင်း၍ YBOP ကိုဖျက်သိမ်းရန်လှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် URL ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်ဂယ်ရီ Wilson သည်သူ၏အမှတ်တံဆိပ်များအပေါ်ချိုးဖောက်မှုစွပ်စွဲချက်များကိုဖြေရှင်းခြင်းအဖြစ် RealYourBrainOnPorn.com (RealYBOP) ဒိုမိန်းအမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင် YBOP ကိုဖျက်သိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်စတင်ခဲ့သော Prause နှင့်သူမ၏ခရိုနီများ၏ရန်လိုသောလှုပ်ရှားမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ၎င်းနောက် visitors ည့်သည်များကိုရှုပ်ထွေးစေရန်ကြိုးပမ်းမှုများဖြင့်နောက်ဆုံးတွင် YBOP ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုရှုတ်ချခဲ့သည်။ ကြည့်ပါ - သတိပြုရန်: YBOP သည် www.RealYourBrainOnPorn.com ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုဖြေရှင်းခြင်းတွင်ရရှိသည်